မျိုးသာကီအတွက် ရဲဝံ့ ဒို့ အာဇာနည်: September 2010 “၂၀၁၀ ကမ္ဘာ့ လူအခွင့်အရေး၏ တိုက်ပွဲနှစ်” မြန်မာ့သွေးအနီရောင် မညစ်စေနဲ့ ။ စစ်ကျွန်ဘ၀လွှတ်မြောက်ကြဖို့တော်လှန်ှရေးသို့့ အသင့်ပြင်
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 4:48 PM0comments
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 3:18 PM0comments
ဒီလိုပြော မှလည်း မိသားစုရေးချောင်လည်တာမို့ 
မြန်မာသတင်း RSS Feeds RSS Feed
နိုဝင်ဘာ ရွေးကောက်ပွဲကိစ္စ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ကာကွယ် By ဦးကျော်ကျော်သိန်း အင်္ဂါ, 28 စက်တင်ဘာ 2010
မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဦးဉာဏ်ဝင်း ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံတွင် မိန့်ခွန်း ပြောကြားနေစဉ်။
သူနဲ့အတူ အဲဒီအစည်းအဝေးမှာ စကားပြောခဲ့သူ နောက်တဦးကလည်း Burma Campaign UK အဖွဲ့ကပဲ စည်းရုံးလှုပ်ရှားရေးမှူး တဦးဖြစ်တဲ့ မမေရီလှပါ။ သူကတော့ မြန်မာနိုင်ငံ၊ လူမျိုးစု တိုင်းရင်းသား ဒေသတွေ၊ အထူးသဖြင့် ကရင်လူမျိုးစုတွေရဲ့ ဒေသတွေမှာ မြန်မာစစ်အစိုးရ ကျူးလွန်နေတဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေကို အဓိက ပြောခဲ့တယ်လို့ မမေရီလှက ဗွီအိုအေကို ပြောပါတယ်။Rest of your post
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 3:07 PM0comments
တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များ ဒုတိယအကြိမ် လျှို့ဝှက်စည်းဝေး
Submitted by Karen Information Center on Tuesday, 28 September 2010
စက်တင်ဘာလ ၂၈ရက်။ စောသိန်းမြင့် (ကေအိုင်စီ)
စစ်အစိုးရကို တော်လှန်တိုက်ခိုက်နေသော တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များနှင့် နယ်ခြားစောင့်တပ် ဖွဲ့စည်းရေးကို ငြင်း ဆန်နေသော တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ စုစုပေါင်း (၆)ဖွဲ့ စက်တင်ဘာလ ၂၄ရက်နေ့မှ ၂၆ရက်နေ့အထိ ဒုတိယအ ကြိမ် လျှို့ဝှက်အစည်းအဝေးတရပ် ပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
အဆိုပါ အစည်းအဝေးတွင် ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး(KNU) အပါအ၀င် ကရင်နီအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ(KNPP)၊ ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး(CNF)၊ မွန်ပြည်သစ်ပါတီ(NMSP)၊ ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့နှင့် ရှမ်းပြည်တပ်မတော်-မြောက်ပိုင်း (SSA-N)တို့ တက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်ဟု သိရသည်။
တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့များအနေဖြင့် အမြဲတမ်း တွေ့ဆုံနိုင်ရန်နှင့် ပိုမိုကျစ်လစ်သည့် အဖွဲ့အစည်းတခုဖြစ်ရန် အစည်းအဝေးတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ခဲ့သည့်အပြင် စစ်အစိုးရက နယ်ခြားစောင့်ဖွဲ့စည်းရေးကို ငြင်းဆန်နေသည့် အပစ်ရပ် တိုင်းရင်းသားအ ဖွဲ့များအပေါ် စစ်ရေးအရ တိုက်ခိုက်လာမည်ဆိုပါက တပ်ပေါင်းစုကြီးအနေဖြင့် စစ်ရေးအရ ၀ိုင်းဝန်းကူညီသွားကြရန် သဘော တူညီမှုရရှိခဲ့သည်ဟု နီးစပ်သူများက ပြောသည်။
ထိုကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်သိရန် အစည်းအဝေးတွင် ပါဝင်သည့် အဖွဲ့တချို့ကို ဆက်သွယ်သော်လည်း ဖြေဆိုရန် ငြင်းဆန်ခဲ့သည်။
၎င်းတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့များ၏ ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေးကို ပြီးခဲ့သည့် မေလ ၂၂ရက်နေ့မှ ၂၃ရက်နေ့အထိ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ချင်း မိုင်မြို့၌ပင် ကျင်းပခဲ့ပြီး ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး(KNU) ၊ ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး(CNF)၊ ကရင်နီအမျိုးသားတိုးတက်ရေး ပါတီ (KNPP)၊ စစ်အစိုးရနှင့် အပစ်ရပ်ထားသည့် မွန်ပြည်သစ်ပါတီ(NMSP)၊ ကချင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့(KIO)တို့မှ စစ် ရေး၊ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးခဲ့ပြီး ရှမ်းပြည်တပ်မတော်-မြောက်ပိုင်း(SSA-N)သည် ယခုအကြိမ်တွင် ပထမဦးဆုံးအကြိမ် တက် ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ယခုတကြိမ် အစည်းအဝေးတွင် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့(၆)ဖွဲ့မှ စစ်ရေးအတွေ့အကြုံရှိသည့် ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင် များ တက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်ဟု သိရသည်။Rest of your post
နွားလှည်းတော့ ယောင်လို့ တောင် မတက်လိုက်နဲ့ တခါတည်း အိမ်မက်ဆိုး မက်သွားမယ်
တာယာ(Tyre) ကို တခဏနဲ့ ပါးသွားစေမည့် ကွန်ကရစ်(concrete)လမ်း ..သေပြည်တော်သို့ ။
နေပြည်တော် ခရိုင်အတွင်းရှိ ကွန်ကရစ် လမ်းမကြီးများပေါ်တွင် မော်ဒယ်နိမ့်ကားများ မောင်းနှင်ပါက အရေးယူသွားမည်ဟု သိရ
နေပြည်တော်ခရိုင် အတွင်းရှိ ကွန်ကရစ်လမ်းမကြီးပေါ်တွင် မြို့တော်အင်္ဂါရပ်နှင့်မညီသည့် မော်ဒယ်နိမ့်ကားများ မောင်းနှင်ပါက မော်တော်ယာဉ်ဥပဒေအရ အရေးယူသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း နေပြည်တော်ယာဉ်ထိန်း ရဲတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးထံမှ သတင်းရရှိသည်။
နေပြည်တော်ခရိုင် အတွင်းရှိ ကွန်ကရစ်လမ်းမကြီးများပေါ်တွင် မော်ဒယ်နိမ့်ကားများဖြစ်သည့် နေပြည်တော် တည်ဆောက်ရေးခွင် အတွင်း အလုပ်ဝင်နေသည့် အုတ်၊ သဲ၊ ကျောက်၊ မြေသယ်ယာဉ် အစရှိသည့်ကားများနှင့် ထော်လာဂျီများ မောင်းနှင်အသုံးပြုပါက မော်တော်ယာဉ် ဥပဒေအရ အရေးယူမည်ဖြစ်ပြီး ယခုလက်ရှိအချိန်တွင် ၎င်းကားများအား နေပြည်တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမှ လမ်းမကြီးများပေါ်တက်မလာ စေရန် ပညာပေးဆောင်ရွက်မှုများ ပြုလုပ်လျက်ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
"အခုလက်ရှိကာလမှာ မော်ဒယ်နိမ့်ကားတွေ၊ ကုမ္ပဏီကြီးတွေက အုတ်၊ သဲ၊ ကျောက်၊ မြေကြီးသယ် ယာဉ်တွေ ဥပမာ TE 11 တို့၊ ချက်ပလက်ကားတို့ နောက်ပြီး အိတ်ဇောက မီးခိုးတအားထွက်နေတဲ့ ကားတွေ၊ အင်္ဂါမစုံလင်တဲ့ ကားတွေကို ကျွန်တော်တို့နေပြည်တော်ရဲ့ ကွန်ကရစ်လမ်းမကြီးတွေပေါ် တက်လာရင် ဥပဒေအရ အရေးယူသွားမှာပါ။ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် နိုဝင်ဘာလမှာ ပြုလုပ်မယ့် ကျောက်မျက်ပြပွဲမှာလည်း နိုင်ငံခြားသားတွေ ပါ လာရောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် ပုံစံမကောင်းတဲ့ကားတွေကို လမ်းမကြီးတွေပေါ် တက်မလာအောင်လည်း နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီက ပညာပေးမှုတွေ ပြုလုပ်နေပါတယ်"ဟု နေပြည်တော်ယာဉ်ထိန်းတပ်ဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့သည်။Rest of your post
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 2:59 PM0comments
Wednesday, 29 September 2010 00:00 Press Release
ရှမ်းမူးယစ်ဆေးဝါး စောင့်ကြည့်ရေးစီမံကိန်းကို ရှမ်းသံတော်ဆင့်သတင်းဌာနမှ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ်သည်။ ၎င်းမှ ရှမ်းပြည် အတွင်း မူးယစ်ဆေးဝါးအခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ အချိန်အခါအလိုက် အစီရင်ခံစာများ၊နှစ်ပတ်လည်စာစောင် များ ထုတ်ဝေသည်။Rest of your post
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 2:56 PM0comments
မြန်မာ့နိုင်ငံအရေး သတင်း အမှန်တင်နေသော အင်တာနက်စာမျက်နှာများ တိုက်ခိုက်မှူတွင် တရုတ်ပါဝင်နိုင်။
Cyber Attack တရုတ် လက်ချက်လား ဧရာဝတီ Tuesday, September 28, 2010
under-attackဧရာဝတီ သတင်းဌာန၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်များကို တရုတ်နိုင်ငံမှ တဆင့် အများဆုံး တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး အမေရိကန်နှင့် သြစတြေးလျ နိုင်ငံ တို့မှ IP လိပ်စာများလည်း ပါဝင်သည်ဟု မန်နေဂျာဖြစ်သူ ကိုဝင်းသူက ပြောသည်။
၂၀၀၈ ခုနှစ် ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး၏ ပထမ နှစ်ပတ်လည်ကာလတွင်လည်း မြန်မာသတင်းဌာနများကို ယခုကဲ့သို့ တိုက်ခိုက်ခြင်းမျိုးများ ရှိခဲ့ကြောင်း ယခုအကြိမ်တိုက်ခိုက်မှုသည်လည်း ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး သုံးနှစ်မြောက် ကာလ အဖြစ် တိုက်ခိုက်ခြင်းလည်း ဖြစ်နိုင်သည်ဟု လေ့လာသူများက ပြောဆိုကြသည်။Rest of your post
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 2:41 PM0comments
ပြည်သူများအနေဖြင့် ၎င်းတို့အမည် မဲစာရင်းထဲ ပါမပါ လာရောက်ကြည့်ရှုသူ အလွန်နည်းခြင်းကြောင့် ယခု ရွေးကောက်ပွဲတွင် စိတ်ဝင်စားမှု မရှိသည်ကို ဖော်ပြနေကြောင်း ရန်ကုန်မြို့ခံ အသိုင်းအဝိုင်းက ဝေဖန်ပြောဆိုနေကြသည်။ Rest of your post
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 2:38 PM0comments
မယ်လဒုက္ခသည်စခန်းမှ မိသားစုဝင်တချို့ ဂျပန်ရောက်ပြီ
ဂျပန်အစိုးရနှင့် နိုင်ငံတကာရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ရေးအဖွဲ့ (IOM)တို့၏ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးမှုဖြင့် တတိယနိုင်ငံ(ဂျပန်)တွင် အခြေချနေထိုင်ခွင့်ရသော ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ်ဒုက္ခသည်စခန်းမှ မိသားစု ၅ စု (လူဦးရေစုစုပေါင်း ၂၇ ဦး) အနက် အိမ်ထောင်စု ၃ စု (လူဦးရေ ၁၈ ဦးသာ)ဂျပန်နိုင်ငံသို့ ပထမဦးဆုံးအသုတ်အနေဖြင့် ယနေ့နံနက် ၇:၁၀ မိနစ်တွင် JAL လေကြောင်းလိုင်းဖြင့် ရောက်ရှိလာပြီ် ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
ဂျပန်နိုင်ငံသို့လာရောက်အခြေချနေထိုင်ခွင့်ရှိသော ကရင်မိသားစုများ (ဓါတ်ပုံ-မျိုးမြင့်ဆွေ)
မူလအစီအစဉ်အရ မိသားစု ၅ စုစလုံး လာရောက်ဖို့စီစဉ်ထားသော်လည်း၊ မိသားစု ၂ စုမှာ နေထိုင်မကောင်းဖြစ်နေသောကြောင့် တပါတည်းလိုက်ပါလာနိုင်ခြင်းမရှိပဲ ကျန်ရှိခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သွားရောက်ကြိုဆိုရေးအဖွဲ့တွင် ပါဝင်သူတစ်ဦးဖြစ်သည့် ကိုမျိုးမြင့်ဆွေ၏ ပြောပြချက်အရသိရှိရသည်။
ဂျပန်သို့လာရောက်အခြေချသည့်သူများမှာ မယ်လဒုက္ခသည်စခန်းမှ ကရင်မိသားစုများဖြစ်ပြီး၊ အဆိုပါ မိသားစုများကို ဂျပန်အစိုးရပိုင်းမှ တာဝန်ရှိသူများကလည်း ကြိုဆိုကြပြီး ကြိုဆိုရေးအဖွဲ့ တာဝန်ခံများ စီစဉ်ထားသည့်နေရာတွင် နေထိုင်ကြမည်ဖြစ်သည်။ အခြေချနေထိုင်ခွင့်ရသည့် ကရင်ဒုက္ခသည် မိသားစုများ၏ စားဝတ်နေရေးအတွက် ဂျပန်အစိုးရမှ (၆လ သာ တာဝန်ယူမည်ဖြစ်ပြီး သတ်မှတ်ကာလ ကျော်သွားပါက မိမိအစီအစဉ်ဖြင့်ဂျပန်တွင်ရပ်တည်သွားကြရမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
Posted by kyaw kyaw naing at 5:27 PM0comments
(ဗွီဒီယို လင့်ကို ဆက်ကြည့်)
The issue of Political Prisoners and Burma has taken centre stage today at the annual British Labour Party conference being held in Manchester, UK. The short film made about this political prisoner work was shown as an introduction to the most incredible speech ever given in this country by anyone at any political conference or meeting about Burma. Waihnin Pwint Thon, daughter of jailed 88 Generation Student leader Ko Mya Aye, and one of the leading campaigners for Burma and political prisoners in her own right, gave an extraordinarily powerful speech that not only defied her young age, but deserved the lengthy standing ovation it received.
waihnin speech labour party conference 2010.mov.temp
Dressed in white out of memory for her father and his colleagues of the 88 Generation Students, she brought back memories of the famous speech Daw Aung San Suu Kyi delivered at the west gates of the Shwedagon Pagoda on 26th August 1988. Today Waihnin deliveredapowerful speech that elevated the issue of Burma to centre stage of the newly formed Labour Party at this most crucial time with elections fast approaching and on the day the UN General Assembly meets to discuss Burma.
Please forward this link to everyone, everywhere.
All Rights ReservedRest of your post
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 3:22 PM0comments
"အကုန်ထအုံကြွ" မယ်ဆိုတဲ့ တောင်ကိုရီးယားက မျိုးချစ်မြန်မာများ
တောင်ကိုရီးယားမှ ထုတ်လုပ်ဖြန့် ချီမည့် “အကုန်ထအုံကြွ”တေးသီချင်းစီဒီကြော်ငြာ
ကိုရီးယားနိုင်ငံရောက် မျိုးချစ်မြန်မာများအတူတကွ ပူးပေါင်းပြီးစီစဉ်တင်ဆက်ထားသည့် အကုန်ထအုံကြွဟုအမည်ပေးထားတဲ့ ပြည်သူ့ရင်ဖွင့်သံတေးစု(၂)တေးသီချင်းစီဒီကိုနအဖစစ်အုပ်စုရဲ့ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင် လာမည့် အောက်တိုဘာလ (၃)ရက် တနင်္ဂနွေနေ့တွင် စတင်ထုတ်ဝေ ဖြန့်ချီမည်ဟု စီစဉ်ထားကြောင်းသိရပါတယ် ။
ထိုတေးသီချင်းစီဒီထဲတွင် တချိန်ကနာမည်ကြီးလူကြိုက်များပြီးအများပါးစပ်ဖျားဝယ် ရေပန်းစားခဲ့သည် မြန်မာ့ခေတ်ဟောင်းတေးသီချင်းများဖြစ်သည့်သုံးပန်လှ ၊ရိုင်းတဲ့စင်ယော်၊ ဥုံဖွ၊ ရွှေသုန္ဒရီ၊ လည်လည်သွားမယ်၊ မမပုသိမ်သူ၊ ရောင်ပေစူး၊ ရန်ကုန်သူ၊ အစရှိသည့်တေးသီချင်း(၈)ပုဒ်ရဲ့ တေးသွားသံစဉ်နှင့်အလိုက်ကိုယူပြီးအထူးသဖြင့် နအဖစစ်အုပ်စုရဲ့ ကလိမ်စေ့ငြမ်းဆင် လိမ်ညာလှည့်စား ထားပြီး မကြာခင်လပိုင်းအတွင်း ကျင်းပပြုလုပ်ရန် ပြင်ဆင်ထားသည့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို ကန့်ကွက်ရှုတ်ချထားကာလှောင်ပြောင် သရော်ထားသည့် စာသားများဖြင့်ထည့်သွင်းကာ ပြန်လည် သီကုံးထားပြီး တင်ပြသီဆိုထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်သီချင်းစာသားများကိုရဲနိုင်ဝင်း(ရွှေကျွန်း)မှ တကိုယ်တော်ပင်တိုင် ရေးသားသီကုံးထားပြီး ၊ တေးသီချင်း များကိုအာကြယ်၊၀င်းလှိုင်(နန်းတော်ရှေ့)နှင့် အာဗြဲတို့ကအထူးခံစား သီဆိုသရော်ထားကြပြီး တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဆိုးလ်မြို့တော်ရှိ Sound 21စတူဒီယိုတွင် ခေတ်မီအသံဖမ်းစက်ကရိယာများဖြင့် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် အသံသွင်းဖမ်းယူထားကြောင်းသိရပါတယ်။
တေးရေးဆရာရဲနိုင်ဝင်း(ရွှေကျွန်း)နှင့်အဆိုရှင်များဖြစ်ကြသည့်အာကြယ်နှင့် အာဗြဲတို့အတွဲဟာ လွန်ခဲ့ သည့် ၂၀၀၇ ခုနှစ်ကလည်း ခြစားယို့ယွင်းမြန်မာ့ရှု့ခင်းလို့အမည်ရှိတဲ့ ပြည်သူ့ရင်ဖွင့်သံတေးစု(၁)ကို စတင်ထုတ်ဝေဖြန့်ချီခဲ့ပြီး နအဖစစ်အုပ်စုကိုအကွက်ကျကျအချက်ကျကျဖြင့် လှောင်ပြောင်သရော်ထားသည့် သူတို့ရဲ့တေးသီချင်းများသည် ကမ္ဘာအနှံအပြားရှိ မြန်မာနိုင်ငံသားများအတွင်းမှာ အောင်မြင်ကျော်ကြား ရေပန်းစားခဲ့သည့် တေးသီချင်းများအဖြစ် မှတ်တမ်းတင်ထားနိုင်သူများဖြစ်ခဲ့ပါတယ်၊
ယခုတကြိမ် "အကုန်ထအုံကြွ" ပြည်သူ့ရင်ဖွင့်သံတေးစု(၂)အား စီဒီတစ်ချပ်လျှင်တောင်ကိုရီးယား နိုင်ငံအတွင်းမှာ ကိုရီးယားဝမ်(၅၀၀၀)နှုန်းဖြင့် ဖြန်ချီရောင်းချပေးမှာ ဖြစ်ပြီးကမ္ဘာအနှံအပြားမှာ ရောက်ရှိနေထိုင်နေကြသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများမှ အလိုရှိလျင် စီဒီတချပ်လျင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၅)ဒေါ်လာ နှုန်းဖြင့် ရောင်းချပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်၊ ပေးပို့ရမည့် နိုင်ငံအလိုက် စာတိုက်ပို့ခကြေးကို ထည့်ပေါင်းပေးဆောင်ရမည်မှာဖြစ်ပါတယ်၊ ရရှိလာမည့် အကျိုးအမြတ်အားလုံးကိုမြန်မာပြည်တွင်းရှိ မြန်မာပြည်သူများအကျိုးကို ဆောင်ရွက်နေသည့် လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများအားပေးပို့လှုဒါန်းကူညီ သွားမှာ ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့် မြန်မာပြည်သူ ပြည်သားများအနေဖြင့် ၀ယ်ယူအားပေးခြင်းဖြင့် အတူတကွ ကုသိုလ်ပါဝင်ကြပါရန်လည်းတိုက်တွန်းနှိုးဆော်အပ်ပါတယ်
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရောက် မျိုးချစ်မြန်မာတွေစီစဉ်တာဆိုရင် သူများတွေနဲ့မတူတမူထူးခြားတတ်တာမို့ ကမ္ဘာအနှံအပြားက မြန်မာတို့အနေနဲယခု "အကုန်ထအုံကြွ" လို့အမည်ပေးထားသည့် တေးသီချင်းစီဒီကို အမြဲတမ်းနားဆင်ဖို့နှင့် အမှတ်တရသိမ်းဆည်းထားဖို့ စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တော့ ကိုရန်နိုင်ထွန်း (ဖုံးနံပါတ်+၈၂+၁၀-၈၇၂၃-၄၇၇၃)ကို အချိန်မရွေးဆက်သွယ်နိုင်ပြီး အီးမေလ်းအနေနဲ့ဆိုရင် yannainghtunkorea@gmail.comကိုစာရေးမှာကြားနိုင်သလို "အကုန်ထအုံကြွ" ပြည်သူ့ရင်ဖွင့်သံ တေးစုနှင့်ပတ်သက်၍ အသေးစိတ် သိရှိလိုသူများအနေဖြင့် တေးရေးဆရာရဲနိုင်ဝင်း(ရွှေကျွှန်း) (ဖုံးနံပါတ်+၈၂+၁၀-၄၇၉၉-၄၃၂၂)နှင့် တေးသံရှင်ဝင်းလှိုင်(နန်းတော်ရှေ့) (ဖုံးနံပါတ်+၈၂+၁၀-၅၁၈၀- ၂၂၀၈) တို့ကိုလည်းဆက်သွယ် မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်လို့ သိရှိရပါသည်၊Rest of your post
Posted by kyaw kyaw naing at 1:17 AM0comments
Labels: သတင်း ကြေငြာချက်
Posted by HRmyanmar at 11:59 PM0comments
မှန်တာလေးတွေ အပြောခံရတော့ ရှက်ရမ်းလေးရမ်းတာပါ ။Mass cyber-attack paralyses Burmese media
နအဖ မမှန်ကြောင်း ၊ လိမ်နေကြောင်း၊ အမှန်တွေကို နအဖက ဖုံးကွယ်ထားကြောင်း ကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းတင်ပြတဲ့ မြန်မာ့ အင်တာနက်သတင်းဌာနတွေ မနေ့ က အတိုက်အခိုက်ခံရပါတယ်။ အထက်လမ်းနည်းနဲ့ လည်း အကြမ်းဖက်တယ် အောက်လမ်းနည်းနဲ့ လည်း ထမိန်ခြုံတိုက်နေတဲ့ နအဖပါ။
Mass cyber-attack paralyses Burmese media thumbnail
Location of top 20 sources for 20 Sept attack on DVB, with the main source being Georgia (DVB)
Author: FRANCIS WADE Category: Elections, News, Politics Rest of your post
ပြန်ပေးဂိုဏ်းခေါင်းဆောင် တရားသူကြီး Monday, 27 September 2010 13:45 စစ်ထက်နိုင်
၂၀၁၀ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ( ၂၁ ) ရက်နေ့တွင် မူဆယ်မြို့ ၊ ခရစ်ယာန်ရပ်ကွက် ( ၀က်သတ်ကုန်း ) ၊ အမှတ် ( ၂၂၅ ) နေ ကိုတူးလွန် ( ခ ) ဖေါ်တူးဂမ် မှ ၄င်း၏အမဖြစ်သူ၏ သားနှင့်ချွေးမဖြစ်သော နော်လွမ် နှင့် ထူဆမ် တို့အား KIA မှ ဖမ်း ဆီးသွားကြောင်း မူဆယ်ရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းတွင် အမှုဖွင့်တိုင်ကြားသည့် ဖြစ်ရပ် တခု ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါသည်။
ဒီအမှုဖြစ်စဉ်ကြောင့် မူဆယ်မြို့သူ/သားများ၏စိတ်ထဲဝယ် တရားဥပဒေသည် ပြည်သူ့ဘက်၌မရှိ်။ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ အစည်းဆိုတာ ဘယ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့မဆို လက်နက်အားကိုးအနိုင်ကျင့်သူကြီးသာ ဖြစ်သည့်အတွက် ၂၀၁၀ ခုနှစ် နိုဝင်္ဘာလ ( ၇ ) ရက် ( ကရင်ပြည်နယ်နေ့ ) တွင် ကျင်းပမည့်ရွေး ကောက် ပွဲတွင် လက်နက်ကုိင်အဖွဲ့အား နောက်ခံပြု ထားသည့် မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းအား ဆန္ဒပြုထောက်ခံရမည် ကို ဝေခွဲမရ ဖြစ်နေကြရပေသည်။Rest of your post
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 5:38 PM0comments
ဝန်ထမ်းများထံမှ ကြိုတင်မဲစာရင်း ကောက်ယူ ဧရာဝတီ Monday, September 27, 2010
USDP02နေပြည်တော်မှ အစိုးရဝန်ထမ်း အားလုံးနှင့် ဗဟိုဝန်ထမ်း တက္ကသိုလ်မှ သင်တန်းသားများထံမှ သက်ဆိုင်ရာ ဌာန အကြီးအကဲများက စက်တင်ဘာလ ၁၄ ရက်မှ ၁၈ ရက်အတွင်း ကောက်ယူခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း နေပြည်တော် စစ်ဘက်၊ နယ်ဘက် ၀န်ထမ်း အသိုင်းအဝန်းနှင့် ဖောင်ကြီးမှ သင်တန်းသား ၀န်ထမ်းများက ပြောသည်။
“ဥပဒေမှာ ပါတဲ့အတိုင်းဆိုရင် ဖျားနာသူ၊ ခရီးသွားမယ့်သူ၊ နိုင်ငံ့တာဝန် ထမ်းဆောင်ရင်း ရပ်ဝေး ရောက်နေတဲ့သူတွေသာ ကြိုတင်မဲပေးခွင့်ရှိမယ်။ ကြိုတင်မဲကို သံသယရှိတယ်။ ကြိုတင်မဲက ကြံ့ဖွံ့ပါတီရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲမှာ အနိုင်ရမယ့် ၀ှက်ဖဲပဲ” ဟု ပြည်တွင်း နိုင်ငံရေးသမားတဦးက သုံးသပ်သည်။
လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ အနေဖြင့် မဲဆန္ဒနယ်ရှိ မဲပေးခွင့်ရှိသူ အရေအတွက်စာရင်း မိတ္တူကို တမျက်နှာလျှင် ၂၀၀ ကျပ်ပေးပြီး မြို့နယ် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ထံမှ ကူးယူရမည်ဖြစ်ရာ ငွေကြေးကုန်ကျမှု အလွန်များမည် ဖြစ်သောကြောင့် မဲစာရင်း မိတ္တူ မရယူနိုင်ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ရွေးကောက်ပွဲနေ့တွင် ကြိုတင်မဲစာရင်းပေးသူ အရေအတွက်နှင့် မည်သူက ကြိုတင်မဲပေးသည်ကို မဲစာရင်းမိတ္တူနှင့် တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးရန် မဖြစ်နိုင်ကြောင်း အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အင်အားစု (NDF) မှ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတဦးက ပြောသည်။
“မြို့နယ်တခုမှာ မဲပေးနိုင်သူ အရေအတွက် သောင်းချီရှိတယ်။ မဲစာရင်းစာရွက်တရွက်မှာ မဲဆန္ဒရှင် ၁၀ ဦး နာမည်ပဲပါတယ်။ မြို့နယ်တခုလုံးရဲ့ မဲဆန္ဒရှင် သောင်းဂဏန်းစာရင်းကို မိတ္တူကူးရရင် အနည်းဆုံး ကျပ်သိန်း ၂၀ နဲ့ ၃၀ ကြားကုန်မယ်။ မဲစာရင်း မိတ္တူကူးဖို့ မဖြစ်နိုင်ဘူး” ဟု အဆိုပါ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းက ဆိုသည်။
ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်က ထုတ်ပြန်ထားသော လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲ နည်းဥပဒေပုဒ်မ ၁၅ (ခ) တွင် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းကဖြစ်စေ၊ ခိုင်လုံသော အကြောင်းပြချက် ပြနိုင်သူဖြင့် တခြားသူ တဦးဦးကဖြစ်စေ မဲစာရင်းမိတ္တူကို ကူးယူခွင့်ပြုရန် လျှောက်ထားပါက တစ်မျက်နှာလျှင် ငွေကျပ် ၂၀၀ နှုန်းဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲက စီစဉ်ပေးထားသည့်အတိုင်း ကူးယူခွင့်ပြုရမည်ဟု ဖော်ပြပါရှိသည်။
ရွေးကောက်ပွဲ၌ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်မည့် နိုင်ငံရေးပါတီ ၃၇ ပါတီရှိပြီး ၃၅ ပါတီသည် ပါတီဝင်အင်အား စာရင်းကို ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ထံ တင်ပြထားပြီး ဖြစ်ကြောင်း သတင်းစာများတွင် ဖော်ပြထားသည်။Rest of your post
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 5:23 PM0comments
ဥာဏ်ဝင်းကတော့ ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်တွေ ရှေ့ မှာ ပေါ်တင်ကြီး ကြေငြာသွားပါတယ်
ဗမာပြည်နောက် ၅နှစ်မှာ အကုန်ချမ်းသာမယ်တဲ့ ။
အပြောတမျိုးအလုပ်တမျိုး လုပ်ခဲ့တဲ့အစိုးရ ဒီတကြိမ်တော့ မှန်ကောင်းပါရဲ့။ ပြည်သူအပေါင်းတို့ ရေ ဆရာကြီးဥာဏ်ဝင်းရဲ့ သမိုင်းဝင်စကားကို ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ပါစို့ လား။
ဓါတ်ပုံ E11 မှတဆင့် ကူးယူ သရုပ်ဖေါ်ပါသည် Dtm
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 12:03 PM0comments
ဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဆက်ဖတ်ရန်
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 11:58 AM0comments
မြောင်းမြနှင့် ၀ါးခယ်မတွင် ကြံ့ဖွံ့ပါတီ ပွဲကြမ်းနေ.....ဆက်ဖတ်ခင်မျ
မြောင်းမြနှင့် ၀ါးခယ်မတွင် ကြံ့ဖွံ့ပါတီ အဓမ္မစည်းရုံးရေး ဆင်းနေ
Submitted by Karen Information Center on Friday, 24 September 2010No Comment
စက်တင်ဘာလ ၂၅ရက်။ ကေအိုင်စီ
ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ(USDP)သည် ဧရာဝတီတိုင်း၊ မြောင်းမြမြို့နယ်နှင့် ၀ါးခယ်မမြို့နယ်များတွင် ယခု လလယ်ပိုင်း၌ မြို့နယ်စည်းရုံးရေးမှူးများသည် ကျေးရွာအချို့တွင် အဓမ္မ စည်းရုံးမှုများ ပြုလုပ်နေကြောင်း ဒေသခံများက ပြော ဆိုနေကြသည်။
မြောင်းမြမြို့နယ် စကမြားကျေးရွာအုပ်စုမှ ကြံ့ဖွံ့ပါတီ စည်းရုံးရေးမှူး ဦးဇော်မင်းသန်းသည် ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုရှိ ရွာအချို့တွင် ရွာသားများအား မက်လုံးပေး၍ စည်းရုံးခဲ့သည့်အပြင် သဘောမတူဘဲ အိမ်ပေါ်တက်ကာ အိမ်သားများကို ဓာတ်ပုံရိုက်ယူခဲ့ ကြောင်းလည်း အမည်မဖော်လိုသူ ဒေသခံတစ်ဦးက ယခုလို ပြောသည်။
“ဒီလ ၁၈ရက်နေ့က ကြံ့ဖွံ့စည်းရုံးရေးမှူး ဦးဇော်မင်းသန်းက ရွာသူရွာသားတွေကို ကြံ့ဖွံ့တံဆိပ် တီရှပ်တွေပေးပြီး မက်လုံးပေး စည်းရုံးခဲ့တယ်။ နောက်ပြီး စကမြားကျေးရွာအုပ်စု သရက်ကုန်းရွာက ဦးတင်ဝင်းကိုလည်း အတင်းခေါ်ပြီး အစည်းအဝေးတက် ခိုင်းခဲ့တယ်လေ။ ဒါတောင်ကမဘူး။ ကရင်လူမျိုးတွေ နေထိုင်တဲ့ ချမ်းသာကုန်းရွာကိုသွားပြီး သူတို့ကြံ့ဖွံ့ပါတီကို လူဦးရေ ၅၀၀ ၀င်ရမယ်လို့ အတင်းစည်းရုံးတယ်။ နောက် အိမ်ထဲဝင်ပြီး အိမ်ရှင်သဘောမတူဘဲ အိမ်သားတွေကို အတင်းပဲ ဓာတ်ပုံရိုက်ယူ သွားတယ်လေ။”ဟု ဆိုသည်။
အဆိုပါစကမြားကျေးရွာမှ နေပြည်တော် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင် ဦးတင်ဆန်းက လာမည့် ရွေးကောက်ပွဲတွင် မြောင်းမြ မြို့နယ်၏ ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ၀င်ရောက်အရွေးခံမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အလားတူ ၀ါးခယ်မမြို့နယ်၊ ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ၏ စည်းရုံးရေးမှူး ဦးမြင့်ဇော်ကဦးဆောင်၍ တောင်အူသပြုကျေးရွာလူကြီး ဦးမောင်နီနှင့် စည်းရုံးရေးမှူး ဦးလှဦးတို့သည် ရွာသားများကို ပါတီသို့ဝင်ရောက်ရန် အတင်းအဓမ္မ လက်မှတ်ထိုးခိုင်းပြီး ဓာတ်ပုံ ရိုက်ယူခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
၎င်းအပြင် ကြံ့ဖွံ့ပါတီသို့ ၀င်သူတစ်ဦးလျှင် ငွေ ၂ကျပ်တိုးဖြင့် ငါးသောင်းကျပ်၊ ကျေးရွာဥက္ကဌနှင့် ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူးများကို ငွေကျပ် ၄သိန်းစီ ဦးမြင့်ဇော်က ချေးပေးကြောင်းနှင့် အခြားပါတီများ လာရောက်စည်းရုံးပါက အကြောင်းကြားရန်လည်း မှာ ကြားသွားခဲ့သည်ဟု ရွာသားတစ်ဦးက ယခုလို ပြောပြသည်။
သူက “မြို့နယ်စည်းရုံးရေးမှူး ဦးမြင့်ဇော်က ရွာဥက္ကဌ ဦးမောင်နီ၊ ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး ဦးလှဦး၊ ဦးအုန်းသောင်း၊ ဦးမျိုးမြင့်နှင့် ဦးစိုးဝင်းတို့အား ငွေကျပ်လေးသိန်းစီ ချေးပေးတယ်လေ။ ပြီးတော့ သူတို့ပါတီကို ၀င်တဲ့သူဆိုရင် ၂ကျပ်တိုးနဲ့ ငွေ ငါးသောင်း ချေးပေးတယ်။ ဒါတောင်မကဘဲ အခြားပါတီတွေ ကျနော်တို့ကျေးရွာကို လာပြီး စည်းရုံးရေးဆင်းတာကို တွေ့ရင် သူတို့ကို အကြောင်းကြားဖို့လည်း အဲဒီ ဦးမြင့်ဇော်က မှာသွားခဲ့သေးတယ်။”ဟု ပြောဆိုသည်။
ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီသည် အလားတူ စည်းရုံးမှုမျိုးကို ကရင်ပြည်နယ်ရှိ ကျေးရွာများတွင်လည်း လိုက်လံ လုပ်ဆောင်နေ ကြောင်း သိရသည်။Rest of your post
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 11:54 AM0comments
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 11:52 AM0comments
ဧရာဝတီ Saturday, September 25, 2010
ယမန်နေ့က သမ္မတ အိုဘားမား အာဆီယံ ခေါင်းဆောင်များ ရှေ့မှဖြတ်၍ စကားပြော စင်မြင့်ရှိရာသို့ လျှောက်လာ စဉ်။ အိုဘားမား ၏ ဘေးတွင် ကွယ်နေသူမှာ မြန်မာ နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး ဦးဉာဏ်ဝင်း ဖြစ်သည်။ (ဓာတ်ပုံ - Getty Images)
အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဟီလာရီ ကလင်တန်သည်လည်း အောက်တိုဘာလ၌ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ ဟနွိုင်းမြို့တွင် ကျင်းပမည့် အာဆီယံ ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲ သို့ တက်ရောက်မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။Rest of your post
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 11:45 AM0comments
သံဃာတော်များသွေးမြေကျခဲ့ရသည့် နှစ်ပတ်လည်နေ့တွင် ဂျပန်အန်အယ်လ်ဒီမှသီတင်းကျွတ်ပွဲတော် ကျင်းပမည်
သံဃာတော်များသွေးမြေကျခဲ့ရသည့် စက်တင်ဘာ ၂၆ ရက်နေ့တွင် ဂျပန်အန်အယ်လ်ဒီမှ ၁၁ ကြိမ်မြောက် သီတင်းကျွတ်ပွဲကို စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပြီး စင်တင်တေး ဂီတ၊ မြန်မာ့ရိုးရာအကများနှင့် ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မည့်အပြင် ဈေးဆိုင်ခန်းများဖွင့်လှစ် ရောင်းချ၍ ပျော်ရွှင်စွာကျင်းပပြုလုပ်သွားမည်ဟု သိရှိရပါကြောင်း.....သာဓု... သာဓု...သာဓုပါ
Posted by kyaw kyaw naing at 4:25 AM0comments
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး တရုတ်နိုင်ငံသို့ သွားရောက်ပြီး အပြန်တွင် အမည်ပြောင်း
Posted by HRmyanmar at 10:44 PM0comments
Labels: ဓါတ်ပုံ, နအဖ
ရန်ပိုင် Saturday, September 25, 2010
Share/Save/Bookmark ပဲခူးတိုင်း သာယာဝတီ မြို့နယ်ရှိ တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေး (တစည) ပါတီဝင်များကို ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံဖြိုးရေး ပါတီ (ကြံ့ဖွံ့ပါတီ) က ၎င်းတို့ ပါတီဘက်သို့ အဓမ္မ ပြောင်းခိုင်းသည့် အတွက် တစည ပါတီက အမှုဖွင့် တိုင်ကြား ထားကြောင်း သိရှိရသည်။
ကြံ့ဖွံ့ပါတီခေါင်းဆောင် ၀န်ကြီးချုပ် ဦးသိန်းစိန်
ပြီးခဲ့သည့် တနင်္ဂနွေနေ့က သာယာဝတီမြို့နယ် မြောက် ၀ါးလေးရုံရွာရှိ “တစည” ပါတီဝင် ၁၆ ဦး၏ ပါတီဝင် ကတ်ပြားများကို ကြံ့ဖွံ့ပါတီ စည်းရုံးရေးမှူး ဦးစန်းဝင်းက သိမ်းယူပြီး ပါတီပြောင်းခိုင်းသည့် အတွက် အမှုဖွင့် တိုင်ကြားရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သာယာဝတီ မြို့နယ် တစည ပါတီ စည်းရုံးရေးမှူး ဦးလှကြိုင်က ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
သာယာဝတီခရိုင်တွင် ကြံ့ဖွံ့ပါတီ ၊ တစည ပါတီ၊ ဒီမိုကရက်တစ် ပါတီ( မြန်မာ) နှင့် ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား နိုင်ငံရေး အဖွဲ့ချုပ်တို့ ၀င်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။Rest of your post
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 6:44 PM0comments
ဆလိုင်း ဟံသာစန်း | စနေနေ့၊ စက်တင်ဘာလ ၂၅ ရက် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ၁၂ နာရီ ၅၀ မိနစ်
“နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းက ဒီရွေးကောက်ပွဲကို မထောက်ခံကြပါနဲ့။ ရွေးကောက်ပွဲဝင်တဲ့ ပါတီတွေ အားလုံးဟာ ရုပ်သေးပါတီတွေ ဖြစ်လာပြီ။ ပြည်တွင်းပြည်ပ ပြည်သူတွေ၊ တပ်မတော်သားတွေ၊ ရဟန်းရှင်လူတွေ ဒီပါတီတွေကို မထောက်ခံကြဖို့ တောင်းဆိုချင်ပါတယ်”ဟု အဖွဲ့ ပြောခွင့်ရ ပုဂ္ဂိုလ်က ဆိုသည်။Rest of your post
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 6:41 PM0comments
ဂျပန်တွင် နတ်ကန္ဒားပွဲကြီး ချိမ့်ချိမ့်သဲ ကျင်းပတော့မည်ဟု သတင်းများထွက်ပေါ်လျက်ရှိ
ဂျပန်ရောက် မြန်မာများ၏ စီစဉ်ကျင်းပမှုဖြင့် ဂျပန်နိုင်ငံ ဖူဂျီတောင်ခြေတွင် မြန်မာ့ရိုးရာ နတ်ကန္ဒားပွဲ တော်ကြီးကို ချိမ့်ချိမ့်သဲ ကျင်းပတော့မည်ဟု သိရှိရသည်။ ဂျပန်တွင် မြန်မာခေတ်ပေါ် စတိတ်ရှိုး၊ အငြိမ့်၊ ပြ ဇာတ်၊ ရုပ်သေးပွဲ စသည်တို့မကြာခဏကျင်းပလေ့ရှိခဲ့ရာ ယခုကဲ့သို့နတ်ကန္နားပွဲကျင်းပခြင်းမှာ ပထမဆုံး ဖြစ်သည်။
ဂျပန်ရောက်မြန်မာများသည် နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေး၊ ဘာသာရေး စသည့်ကိစ္စများတွက် အမြဲတမ်း လက်မနှေးပဲ ထိပ်ဆုံးက ရှိတက်သည့်အားလျော်စွာ ယခု နတ်ကန္ဒားပွဲကိုလည်း ၂၁ ရာစုအတွင်း ပြည်ပနိုင်ငံများတွင် ဟိုးလေးတကြော် ကျင်းပမည့် ပထမဆုံးပွဲဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
ထူးခြားချက်မှာ ယခုနတ်ကန္နားပွဲကို ဂျပန်မြန်မာချစ်ကြည်ရေးအဖြစ် ကျင်းပမည်ဖြစ်ရာ မြန်မာ အတွင်း ၃၇ မင်း၊ အတွင်း ၃၇ မင်း၊ အလယ် ၃၇ မင်း စသည့်နတ်များအပြင် ဂျပန်ရိုးရာနတ်များလည်း ပူးပေါင်းပါဝင်ကြမည်ဟု သိရသည်။
မြန်မာပြည်က နတ်လောကတွင် ပေါ်ပြူလာ ဖြစ်နေသည့် နတ်တပါးအား မိမိတို့ သတင်းဌာနမှ ဆက်သွယ်မေးမြန်း ကြည့်ရာ.. “ဟုတ်ပါတယ်။ ဂျပန်ကို သွားမှာလေ။ ဗီဇာတောင်ရပြီးပြီ.. အဲ.. ရွေးကောက်ပွဲ နီးနေတော့ မဲပေးပြီးမှ သွားခွင့်ရမယ်လို့ လည်းကြားတယ်..။ နတ်တွေလည်း ဒီရွေးကောက်ပွဲကြောင့် စိတ်ညစ်နေရတယ် ”ဟု ဆိုသည်။
တောင်ပြုံးဖက်တွင် ခရီးလွန်နေသည့် နတ်ကတော်တဦးက.. “ဒီမှာကလည်း ပွဲဆက်တွေများတဲ့ကြားက ဂျပန်က လှမ်းဖိတ်တော့လည်း သွားရမှာပေါ့။ သိတယ်မဟုတ်လား.. နတ်လောက စည်ပင်သာယာတိုးတက်ပြီး နိုင်ငံတကာ အဆင့်ရောက်ဖို့သွားရမှာပေါ့..”ဟု နတ်သံနှော၍ ပြောပြသည်။
ယခုနတ်ကန္နားပွဲသို့ လာရောက်မည့် နတ်များနှင့်အတူ နတ်အလုပ်အကျွေး၊ နတ်ထိန်း၊ နတ်အဖေါ်၊ နတ် တပည့်။ နတ်စပယ်ယာ၊ နတ်အရံ စသည်တို့ လိုက်ပါလာမည်ဖြစ်ရာ အချို့ လည်း ဂျပန်တွင် နေခဲ့ပြီး မပြန်မည့် သူ များရှိနေနိုင်ကြောင်းလည်း ခန့် မှန်းပြောဆိုနေကြသည်။
“ဒီမှာက နေရတာ ရင်တမမလေ.. ဘယ်နေ့ဗုံးပေါက်မလဲ။ ဘယ်နေ့ မီးလောင်မလဲနဲ့ စိုးရိမ်နေရတာ.. ဒီကြားထဲ မီးကပျက်၊ ရေကကြီး၊ ရောဂါကထူ၊ မဲပေးဖို့ကလည်း တပူပူနဲ့ .. နိပွန်းမှာ ပန်းကန်ပဲဆေးရဆေးရ .. သန့် ရှင်းရေးပဲ လုပ်ရလုပ်ရ… ဒီမှာထက်တော့ စိတ်ချမ်းသာမယ်ထင်တယ်လေ.. ဒီတော့လည်း ဒါတွေရှိနိုင်တာပေါ့ …တချို့ ဆို ဟိုရောက် ရင် အာလျှောက်ဖို့အခုထဲက “အာလျှောက်နည်းသင်တန်း” တောင် တက်နေပြီကြားတယ်“ဟု နတ်မယ်တော်ကြီးတဦးက တွေးတွေးဆဆ ပြောသည်။
ဂျပန်ထက် မြန်မာက သာပါတယ်
မြန်မာနတ်ကန္နားပွဲများမှာ “အိုးကလေးလှုပ်ပါဟေ့.. ရေအိုးလေး လှုပ်ပါဟေ့”ကဲ့သို့ ဟစ်ဟော့သီချင်းများပါ မကျန် ထည့်သွင်းတီးမှုတ်ကခုန်နေသည်ဖြစ်ရာ အလွန် ခေတ်မှီသည့်အတွက် ဂျပန်နတ်များမှာ နောက်ကောက် မကျန်ခဲ့ ရန် အပြင်းအထန် လေ့ကျင့်ပြင်ဆင်နေရသည်ဟုလည်း သတင်းရရှိသည်။
ပွဲတော်ကို သေသပ်ကျစွာ ကျင်းပနိုင်ရန် ပြင်ဆင်လျက်ရှိနေပြီး ကြိုတင်လက်မှတ်များလည်း ရောင်းချ လျက်ရှိရာ မြန်မာစတိုးဆိုင်များနှင့် မြန်မာများအဓိက စုရုံးရာ မြန်မာအခွန်ရုံးတ၀ိုက်တွင် ၀ယ်ယူနိုင်ကြောင်းလည်း သိရှိရသည်။ လက်မှတ်လေးတကိုင်ကိုင်နှင့် ငိုမဲ့မဲ့ဖြစ်နေသူ တဦးက..
“အခုပွဲမှာ တို့ ကလည်း ကမှာလေ။ တို့ ပါမယ့်ပွဲမှာ တို့ ကိုယ်တိုင်က လက်မှတ်ပေးဝယ်ရမယ်တဲ့။ ဟွန်း. ဒါတော့လွန်တာပေါ့နော်“ဟု ဆိုသည်။
နတ်ကန္နားပွဲတွင် “အလုပ်အကိုင်အဆင်ပြေပါ့မလား“ “အလုပ်ဘယ်တော့ပြန်ရမလဲ “ “ဘယ်တော့ အာကျမှာလဲ“ “အာကြီးလား။ အာလေးလား” .. စသည် စသည် တို့ ကိုလည်း နတ်မေးနိုင်ကြောင်း သတင်းရရှိသလို နတ်ကန္နားပွဲတွင် ဈေး ဆိုင်ဖွင့်လှစ်ရောင်းချလိုသူများလည်း ဆက်သွယ်နိုင်ကြောင်း သိရှိရသည်။
ယခုပွဲတော်မှာ တမူထူးခြားသဖြင့် ဂျပန်ရောက်မြန်မာများ အထူးစိတ်ဝင်တစား အားပေးလိမ့်မည်ဟု ပွဲစီစဉ်သူများ က မျှော်လင့်လျက်ရှိသည်။ သူမက…
“သမီးတို့ ခေါ်တဲ့နတ်တွေက ကြာဇာတ်လမ်း.. အဲ “အာရုံဦးမှာ ဟိုဒင်းဖြစ်သည့်ကြာ” ဇာတ်ကားထဲမှာ မပါဘူးလေ။ သန့် သန့် လေးတွေဆိုတော့ ဆန္ဒပြခံရမှာလည်း ပူစရာမလိုဘူး။ လက်မှတ်ပြန်အမ်းရမှာလဲ ပူစရာမလိုဘူး။ အေးဆေးပဲ “ ဟုလည်း ဆိုသည်။
စနစ်တကျ ပြင်ဆင်နေလျက်ရှိနေသော ဂျပန်မြန်မာ ချစ်ကြည်ရေး ခြိမ့်ခြိမ့်သဲ နတ်ကန္နားပွဲကြီးကို ကျင်းပမည့်နေ့မှာ ဂျပန်ရောက် မြန်မာအဖွဲ့အစည်းများ ညီညွတ်သည့်နေ့ ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
ဒေါက်တာ ဂွတိုRest of your post
Posted by ညီအာဇာနည် at 5:18 AM0comments
သူရိန်ထက်ခံစားရေးဖွဲ့ထားတဲ့ ၀တ္ထူဇတ်ညွှန်းကို သီးလေးသီးးအဖွဲ့က ပန်းသီး၊ဇီးသီး၊ ကြယ်သီးတို့နဲ့ Peace Creation Group အဖွဲ့သားတို့က ပူးပေါင်းတင်ဆက်ထားတဲ့ အိုပါးသီလ ဗွီဒီယိုပါ။ ၂၀၁၀ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလမှာ ကျင်းပမယ့် စစ်အုပ်စုရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ၀န်ကြီးဆိုသူတွေရဲ့ အတုအယောင်ဘုရားတရား ကြည်ညှိကိုင်းရှိူင်းမှူတွေကြောင့် ဘုန်းကြီးထံ သီလတောင်းခံရာ မကောင်းတာမှန်သမျှ အကုန်ကျူးလွန်ထားကြလို့ ဘုန်းတော်ကြီး ခမြာ သီလပေးဖို့ခက်နေရင်း နောက်ဆုံးတော့ အိုပါးသီလဘဲ တောင်းခံကြပုံလေးကို သရော်ထားတဲ့ ဗွီဒီယိုကားတိုလေးပါ၊ ကားတိုလေးပေမယ့် အပိုင်းသုံးပိုင်းခွဲတင်ပေးထားတယ်၊ မျှဝေခံစားကြည့်ကြဖို့ပါ။မိမိတို့ ဘလော့ဂ်တွေမှာလည်း အခမဲ့ကူးယူဖော်ပြနိုင်ပါတယ်။
ဘလော့ဂ်မှာကြည့်လို့ အဆင်မပြေဘူးဆိုရင် Youtube မှာသွားကြည့်လိုက်ပါ။ အောက်မှာlinkတွေပေးထားတယ်၊ မိမိတို့ဘလော့ဂ်တွေမှာလည်း ကူးယူဖော်ပြနိုင်တယ် ။ကလစ်သာနှိပ်လိုက်ပါ။ all link
Posted by kyaw kyaw naing at 3:41 PM0comments
အီရန် အာဏာရှင်သမ္မတ မိန့် ခွန်းကို ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံတွေကန့် ကွက်
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 3:14 PM0comments
ပျော်လို့ ထိုင်နေတာမဟုတ်၊ လူသားချင်း မငှဲ့ ညာခံရတဲ့ မြင်ကွင်းသာလျင် ၊ သင်လည်းအဲ့ဒီအထဲမှာ ထိုင်နေရလျင် ဘာကို တွေးနေမည်နည်း?
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 2:28 PM0comments
ဖြုတ် မျက်လုံးနဲ့ ရေတစက် ပင်လယ်ထင်နေ တော့ မခက်လား ?
ချင်းသမ္မတ ဖြစ်စေချင်လို့ ကြံ့ဖွံ့က ၀င်ပြိုင်မယ့်ဒေါက်တာ
ဆလိုင်းထွန်း | ကြာသပတေးနေ့၊ စက်တင်ဘာလ ၂၃ ရက် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ၂၃ နာရီ ၀၅ မိနစ်
နယူးဒေလီ (မဇ္ဈိမ) ။ ။ ကြံ့ဖွံ့ပါတီ ရွေးကောက်ပွဲနိုင်လျှင် ချင်းအမျိုးသားများ သမ္မတဖြစ်လာရန် အခွင့်သာ၍ ယင်းပါတီအမတ်လောင်းအဖြစ် အရွေးခံရကြောင်း ဒေါက်တာမှုထန်က ပြောသည်။
အမတ်လောင်း ဦးရေ ၁,၁၀၀ ကျော်ဖြင့် တနိုင်ငံလုံးပြိုင်မည့် ပါတီမှာ ကြံ့ဖွံ့ပါတီဖြစ်သောကြောင့် ချင်းအမျိုးသားအရေး ပိုလုပ်နိုင်မည့်အပြင် သမ္မတအထိ တက်လှမ်းနိုင်သဖြင့် ချင်းပြည်နယ်လွှတ်တော်အတွက် ထန်တလန်မှ ကြံ့ဖွံ့ ကိုယ်စားပြု ၀င်ပြိုင်မည် ဆိုသည်။
ဒေါက်တာမှုထန်သည် ၁၉၇၃ တွင် မန္တလေး ဆေးတက္ကသိုလ်မှ ဘွဲ့ရကာ ၁၉၇၆-၈၆ တွင် ထန်တလန်ဆေးရုံတွင် အမှုထမ်းခဲ့သည်။ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် တသီးပုဂ္ဂလအနေဖြင့် ထန်တလန်မှပင် ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရာ အနိုင်ရခဲ့သည်။ စစ်အစိုးရကျင်းပသည့် အမျိုးသားညီလာခံတွင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအဆိုပြုချက်များ တင်သွင်းခဲ့သေးသည်။
“ချင်းတွေအတွက် အိပ်မက်မက်ချင်လို့။ ချင်းအမျိုးသားတယောက် ပါတီကြီးမှာ နိုင်ရင် တချိန်ချိန်မှာ ပြည်ထောင်စု အစိုးရထဲ ပါနိုင်မယ်။ သမ္မတတောင်မှ ချင်းလူမျိုးတွေ တက်ဖြစ်လောက်တယ်ဆိုတဲ့ ဆန္ဒရှိတယ်။ ဒါကြောင့် နောင်လာနောက်သားတွေအတွက် အကောင်းဆုံးပါတီ ထင်လို့ ၀င်ရတာပါ” ဟု ဒေါက်တာမှုထန်က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီ CPP (၃၉ နေရာ) ၊ ချင်းအမျိုးသားပါတီ CNP (အရေအတွက် မသိရသေး) စသော ချင်း ပါတီ ၃ ခုအပြင် နေရာ ၉၈၀ ပြိုင်မည့် တစညတို့လည်း ချင်းပြည်နယ်တွင် ဝင်ပြိုင်ကြမည်။
CPP နှင့် CNP ပါတီ ခေါင်းဆောင်များကမူ ကြံ့ဖွံ့တွင် ပါဝင်ခြင်းထက် ချင်းပါတီ သီးသန့်ထောင်၍ ပြိုင်မှသာ သမ္မတဖြစ်နိုင်သည် ဟုဆိုသည်။
“ညွန့်ပေါင်းအစိုးရမှာ ကျနော်တို့လည်း သမ္မလောင်းဝင်မယ်၊ ကြိုက်လို့ မဲပေးရင် ပိုဖြစ်နိုင်တယ်။ ကြံ့ဖွံ့မှာဆိုရင် အများစုက ဗမာတွေဖြစ်တော့ ချင်းလူမျိုး ဘယ်တော့မှ သမ္မတလောင်း ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။ ကြံ့ဖွံ့ထက်တော့ ကျနော်တို့က ချင်းသမ္မတဖြစ်ဖို့ အခွင့်အရေး ပိုရှိတယ်” ဟု CPP အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဦးဇုမ်လှဲထန်း (Zung Hlei Thang) က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
သူကဆက်ပြီး “စစ်တပ်နဲ့ ကြံ့ဖွံ့ပေါင်းပြီး ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ထဲမှာ ထက်ဝက်ကျော်ရရင်တော့ သူပြောတာ မှန်နိုင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ကြံ့ဖွံ့က မဲရမယ် မထင်ဘူး။ ကျနော်တို့လို တခြားပါတီတွေ မဟာမိတ်လုပ်ပြီး နိုင်ရင်တော့ သမ္မတလည်း ကျနော်တို့ပဲ ဖြစ်မယ်။ အလိုအလျောက် ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ ကိုယ်လူမျိုး၊ ကိုယ့်ပြည်နယ်အတွက် ပိုလုပ်နိုင်မယ်” ဟု ပြောသည်။
CNP ပါတီ ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဦးချမ်ဟရဲ (Chen Hre) ကမူ “ကျနော်တို့ကတော့ တကယ့်ဒီမိုကရေစီစနစ်ပဲ လိုချင်တယ်။ အခွင့်အရေးသမား ဖြစ်ရင်တော့ အခွင့်အရေးရနိုင်တဲ့ အဖွဲ့မှာပဲ နေမှာပဲ။ CNP ပါတီအနေနဲ့ သမ္မတမရနိုင်ရင်လည်း ဒီမိုကရေစီအရေးတွက် ရပ်တည်တယ်။ ချင်းတိုင်းရင်းသားအနေနဲ့ သမ္မတလုပ်နိုင်ရင်တော့ သိပ်ကောင်းပါတယ်” ဟု ပြောသည်။Rest of your post
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 2:25 PM0comments
သဘောထားကြီးကြီးနဲ့ သံဃာတွေတော့ သတ်မိပါတယ်၊ သေဒဏ်ကျ ငမိုက်သားတွေကို ဘေးမဲ့စဉ်းစားတဲ့ သန်းရွှေ
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ ကရုဏာ ကြီးမားကြောင်း ပြောဆို ရေးသားသူရှိ NEJ / ၂၄ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၀
၎င်းသည် မြန်မာနိုင်ငံသို့ လူအခွင့်အရေးအခြေအနေများကို ကိုယ်တိုင် သွားရောက် လေ့လာခဲ့ပြီးသည့်နောက် မြန်မာနိုင်ငံ၌ လူမဆန်သည့် ရာဇ၀တ်မှုများနှင့် စစ်ရာဇ၀တ်မှုများ ကျူးလွန်နေမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ကုလသမဂ္ဂက စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ဖွဲ့ စုံစမ်းပေးရန် ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီ၏ (၁၃) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြတောင်းဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ Rest of your post
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 2:19 PM0comments
ရွေးကောက်ပွဲပြီးရင် ပြည်တွင်းစစ်ကြီးလာတော့မယ် (ရန်နောင်)
ဝန်ပြီးရှုပ်သိန်းစိန်က ရွေးကောက်ပွဲပြီးရင် K I O အဖွဲ့ကိုတိုက်မယ်ဆိုတော့ ရွေးကောက်ပွဲပြီး
ရင် ပြည်တွင်းစစ်ကြီးပြန်စတော့မယ်လို့ ကြေငြာလိုက်တာဘဲ။ ဒီပုံတိုင်းဆိုသူတို့ ကုန်းကုန်းပြီး ကန့်တော့လိုက်ရတဲ့ဆင်ဖြူ တွေကလည်း မြန်မာပြည်အတွက် ငြိမ်းချမ်းရေးဆောင် ကျဉ်းပေးနိုင်ပုံမပေါ်ဘူး။
ပြောပုံကရွေးကောက်ပွဲပြီးရင် တိုက်မယ်ဆိုတော့ သူတို့ကရွေးကောက်ပွဲမှာ သူတို့အနိုင်ရ
မယ်လို့ အပိုင်တွက်ထား ပြီးရွေးကောက်ပွဲလွန်ကာလမှ ဘာတွေလုပ်မယ်ဆိုတာတောင် ကြိုတင်ပြင်ဆင် ထားပုံရတယ်။ ဒါကိုတော့ရွေးကောက်ပွဲဝင်မယ် တကဲကဲလုပ်နေတဲ့အသုးံတော်ခံအမတ်လောင်းတွေ သတိပြုသင့်တဲ့ အချက်လည်းဖြစ်တယ်။
ဒီစစ်ပွဲဟာ တရားတာ၊ မတရားတာထားလိုက်အုးံ ။ခုဒီကောင်ကြီး အာချောင်လို့ တဘက်လူက
ကြိုတင်ပြင်ဆင်ချိန်ရသွားပြီး ခုဆို KIO တပ်ဖွဲ့တွေ တပ်ပြင်နေတာတွေ အားလုးံအသိပါဘဲ။
ပြီးတော့ သူတို့က အနောက်ကနေပြီး အရှက်မရှိ ကလေးစစ်သားတွေကို အတင်းတိုက်ခိုင်းပြီး
သေခိုင်းအုးံမယ်။ ဒါကြောင့် ဒီပြောင်ကြီးကို နိုင်ငံတော်သတင်းပေါက်ကြားမှုနဲ့ အရေးယူသင့်တယ်။
ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းတဦး ဖြစ်ရုံသာမက ဝန်ကြီးချုပ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ကောင်က ရန်သူကို ဘယ်အချိန်မှာ တိုက်မယ်လို့ထုပ်ပြောတာကတော့ တာဝန်မဲ့ရာကြပါတယ်။ စစ်တိုက်တယ်ဆိုတာ အသက်နဲ့ရင်းနေရတာပါ။ စစ်တိုက်တဲ့နေရမှာ No Information , No Operationိုတဲ့အခြေခံစစ်ဗျုဟာကို ဗိုလ်ရှုပ်ကြီးဟောင်း နားလည်မယ်ဆိုရင်သူပြောလိုက်တဲ့စကားတခွန်းဟာ တဘက်လူအတွက်ဘယ်လောက်အသုးံဝင်မယ်၊ ကိုယ့်လူတွေအတွက် ဘယ်လောက်အတိုင်းတာအထိ အန္တရယ်ကြရောက်မယ်ဆိုတာ လေးလောက်တော့စဉ်းစားသင့်တယ်။
ဒါကြောင့်တပ်မတော်သားတွေ အနေနဲ့လည်း သေချာစဉ်းစားသင့်ပြီ။ တပ်မတော်သားတွေရဲ့ အသက်၊သွေး၊ ချွေးတွေကို ခွေးကလေး၊ ကြက်ကလေးလေးလောက်တောင်တန်ဖိုး မထားတဲ့ ဗိုလ်ရှုပ်တွေရဲ့ထားရာနေ၊ စေရာသွားဘဝကနေရုန်းထွက်ပြီး ကိုယ်ပိုင်အသိ ညဏ်နဲ့ စဉ်းစား၊ ဆင်ချင်၊ ဆုးံဖြတ်နိုင်ပြီး တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးအကျိုးကို ထမ်းရွက်မဲ့တပ်မတော် သားတွေဖြစ်အောင်ကြိုးပမ်းချိန် တန်ပါပြီလို့။Rest of your post
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 12:30 AM0comments
စစ်ရာဇ၀တ်ကောင်တွေ ထုတ်ဖေါ်စုံစမ်းရေးအတွက် ပြင်သစ်ထောက်ခံ
မြန်မာပြစ်မှု စုံစမ်းရေး ပြင်သစ်ထောက်ခံ
မြန်မာနိုင်ငံက လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေဟာ လူသားမျိုးနွယ်အပေါ် ကျူးလွန်တဲ့ ပြစ်မှု၊ စစ်ရာဇ၀တ်မှု မြောက်မမြောက် ကုလသမဂ္ဂက ကော်မရှင်တရပ် ဖွဲ့စည်း စုံစမ်းမှုတွေ လုပ်ဖို့ တိုက်တွန်းနေရာမှာ ပြင်သစ်နိုင်ငံလည်း ပါဝင်လာပါတယ်။
ဒါပေမဲ့လည်း ပြင်သစ်နိုင်ငံသာမက ဥရောပသမဂ္ဂ (EU) အနေနဲ့ပါ အားပေးထောက်ခံသွားဖို့ နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေး အဖွဲ့တွေက တိုက်တွန်းလိုက်ကြတာပါ။
EU ရဲ့ တညီတညွတ်တည်း ရပ်တည်ချက်ဟာ ကျန် ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံတွေကို အလားတူ ဆောင်ရွက်ကြဖို့ ခိုင်မာတဲ့ သတင်းစကား ပေးပို့ရာ ရောက်စေမယ်လို့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က ပြင်သစ်နိုင်ငံ ပဲရစ်မြို့မှာ ပြုလုပ်တဲ့ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲအတွင်း လူ့အခွင့်အရေး စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ (Human Rights Watch)၊ ပြင်သစ် လူ့အခွင့်အရေး အဖွဲ့ချုပ်နဲ့ နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေး အဖွဲ့ချုပ် (FIDH) တို့က ၀ိုင်းဝန်း တိုက်တွန်းလိုက်ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကုလသမဂ္ဂရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေး အထူးကိုယ်စားလှယ် တိုမာ့စ် အိုဟေး ကင်တားနား (Tomas Ojea Quintana) က မြန်မာနိုင်ငံက လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေတွေကို ကော်မရှင်တရပ် ဖွဲ့စည်း စုံစမ်းဖို့ ပြီးခဲ့တဲ့ မတ်လက အစီရင်ခံစာ တင်သွင်းရာမှာ အကြံပြုခဲ့တဲ့နောက် အခုလို နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀န်းက ၀ိုင်းဝန်း တိုက်တွန်းမှုတွေ ထွက်ပေါ်လာတာပါ။
ဂျီနီဗာမြို့မှာ ကျင်းပနေတဲ့ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး ကောင်စီရဲ့ ၁၅ ကြိမ်မြောက် ညီလာခံအတွင်း ပြင်သစ်နိုင်ငံ ကိုယ်စားလှယ်ကလည်း ဒီအဆိုပြုချက်ကို ထောက်ခံကြောင်းနဲ့ မြန်မာအစိုးရက ဒီအစီအစဉ်ကို အပြည့်အ၀ ပူးပေါင်းဖို့လည်း တိုက်တွန်းခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု နယူးယောက်မှာ ကျင်းပနေတဲ့ ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ ညီလာခံကို တက်ရောက်လာတဲ့ မြန်မာ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဦးဉာဏ်ဝင်းကတော့ တိုင်းပြည် ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ကုလသမဂ္ဂရဲ့ ထောင်စုနှစ် ရည်မှန်းချက်နဲ့အညီ ဖြစ်အောင် ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ ပြောဆိုခဲ့တာပါ။ ဒီအတွက် နိုင်ငံတကာ အကူအညီတွေ လိုအပ်တယ်လို့လည်း အင်္ဂါနေ့တုန်းကပဲ ပြောဆိုခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။Rest of your post
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 1:54 PM0comments
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 1:43 PM0comments
Posted by အာဇာနည် at 11:34 AM0comments
လူ့ အခွင့်အရေးချိုးဖေါက်မှု(လူမဆန်တဲ့ ရက်စက်မှု အတွက် ကုလသမဂ္ဂ ၏ စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ဖွဲ့ ရန် ထောက်ခံကြပါ။
မြ န်မာနိုင်ငံအတွင်း အာဏာရှင်တွေက ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ လူ့ အခွင့်အရေးချိုးဖေါက်မှု(လူမဆန်တဲ့ ရက်စက်မှု) တွေကို ကုလသမဂ္ဂ ကစုံစမ်းရေးကော်မရှင်ဖွဲ့ ဘို့နယူးဇီလန်အစိုးရကလည်း သဘောတူလိုက်ကြောင်း ထပ်မံကြားသိရတဲ့အတွက် ပိုမိုအားရမိပါတယ်။
ရှေ့ ဘက်က သဘောတူခဲ့တဲ့နိုင်ငံတွေမှာ ကြိုးစားခဲ့တဲ့ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ရရှိစေလိုကြတဲ့ နိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာတွေနဲ့ ပူးပေါင်းကူညီနေကြတဲ့ နိုင်ငံခြားသားတွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်စရာပါဘဲ၊နိုင်ငံတကာကနေ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရရှိရေးအတွက် ရတဲ့အခြေအနေ မှာ အတတ်နိုင်ဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားပေးနိုင်တဲ့၊ ပေးချင်တဲ့၊ နိုင်ငံရေးသဘောတရားကိုအဆင့်မြင့်မြင့် နားလည်တဲ့၊ ရိုးရိုးသားသားသူတွေကလည်း နည်းပါးလာပါပြီ။
(နိုင်ငံရေးအဆင့်ကို အင်တာနက်တွေမှာဖတ်ကြည့်၊ရေဒီယိုတွေမှာနားထောင်ကြည့်ရင် သဘောပေါက်နိင်ပါတယ်၊)
ခက်မယ်၊ကြာမယ်၊ဒါပေမဲ့ လောလောဆယ် နိုင်ငံတကာအခြေအနေမှာ ဒါလောက်ဘဲ အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်ဘွယ်ရှိတယ်လို့ကြားသိမြင်နေတဲ့ ဆရာဦးဝင်းတင်ကလည်း ၂၀၊၉၊၂၀၁၀ RFA မနက်ပိုင်းရေဒီယိုအစီအစဉ်မှာ US Campaign for Burma က
အာဏာရူးတွေရဲ့ လူမဆန်မှုတွေကို ဖြစ်နိုင်တာကစပြီး နိုင်ငံတကာက အရေးယူနိုင်အောင်ကြိုးစားရပါမယ်၊ အာဏာရူး စနစ်မရှိအောင် အခြားထိရောက်မယ့်နည်း တွေကိုလည်း ကြံစည်လုပ်ဆောင်သင့်ကြပါတယ်၊ပြည်တွင်းမှာ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ကြမယ့် ယခင်က အဖမ်းခံ အဆီးခံ စွန့် စားလုပ်ခဲ့ကြသူတွေရဲ့ ရေဒီယိုမေးမြန်းခန်းတွေမှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ ပြည်ပက ကူညီမှုတွေကိုပြည်တွင်းက စောင့်မျှော်ခဲ့ကြပေမဲ့ ထိရောက်မှုတွေ မရခဲ့တာကြောင့် ရွေးစရာမရှိလို့ပြောင်းလိုပြောင်းငြားဝင်ရတဲ့သဘော မကြာခဏ ကြားရပါတယ်။
ပြည်ပကနေ ထိရောက်မယ့်ဖိအားတွေ မပေးနိုင်ကြတော့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလည်းဖြစ်မလာ၊ ခုတော့ ဒီမိုကရေစီသမား တွေလည်း ရွေးကောက်ပွဲဝင်တဲ့အဖြစ်ရောက်ကြရတာ သင်ခန်းစာပါ။
(နိုင်ငံတကာ မီဒီယာများကိုလည်း အသုံးပြုတတ်ကြပါစေ)
Posted by အာဇာနည် at 11:27 AM0comments
ယနေ့မြန့်မာနိုင်ငံရေးအလှည့်အပြောင်းသည် စစ်အာဏာရှင်သက်ဆိုးရှည်ရေး အတွက် နိုင်ငံတကာ၏အသိအမှတ်ပြုမှုနှင့် စစ်အုပ်စု အပေါ် နိုင်ငံတကာ၏သဘေားထားများသည် လွန်စွာအရေးပါလှ သောအချိန်ဖြစ်ပါတယ်။
ကုလသမဂ္ဂ၏၂၀၁၀ အထွေထွေညီလာခံတွင်၊ စက်တင်ဘာလ(၂၇) တနင်္လာနေ့မှာ ကုလသမဂ္ဂမြန်မာ့မိတ်ဆွေများအစည်းအဝေး ကို အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် ဘန်ကီမွန်းမှ ကမကထ ပြုကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း ၄င်းကိုယ်တိုင် မြန်မာ့အရေးကို ပျော့ညံ့ လျော့ရဲသောရပ်တည်ချက်များဖြင့်သာ မရေမရာမူဝါဒကိုစွဲကိုင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိနေပါတယ်။
လူထုခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ကိုမင်းကိုနိုင်အပါအ၀င်၊ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား၂၁၀၀ကျော် ကိုလွှတ်ပေးရန်ဖိအားပေးဆောင်ရွက်မှုများသည်လည်း ထိရောက်မှုမရှိသလို။ ဥပဒေအရ အကျဉ်းကျခံရက်ပြည့်သည့် နိုဝင်ဘာလ(၁၃)ရက်နေ့ တွင်ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည်ကို လွှတ်ပေးရမည်ကိုပင် မသေမချာသည့် အခြေအနေတွင်ရှိနေပါတယ်။
ထို့ကြောင့် အောက်ပါတောင်းဆိုချက်(၃)ရပ်ကို ၂၀၁၀ ကုလသမဂအထွေထွေညီလာခံကြီးတွင် ဆုံးဖြတ်ဆောင်ရွက်သွားကြပါရန် တောင်းဆိုဆနွုပြသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
၁။ စစ်ခေါင်းဆောင်များ၏ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများနှင့် လူသားအရင်းအမြစ်ဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်ဖောက်ဖျက်မှုများကို စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မီရှင်ဖွဲ့စည်းပြီး စုံစမ်းဖော်ထုတ် အရေးယူဆောင်ရွက်သွားရေး။
၂။ စစ်အုပ်စု၏ အတုအယောင်၂၀၁၀ ရွေကောက်ပွဲအား အသိအမှတ်မပြုရေး။
၃။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ကိုမင်းကိုနိုင် အပါအ၀င်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံး ချွှင်းချက် မရှိလွှတ်ပေးရေး။
အောက်ပါအစီအစဉ်အတိုင်း ပါဝင်ပူးပေါင်းကြပါရန် အလေးအနက်ဖိတ်ကြားအပ်ပါတယ်။
အချိန်၊ စက်တင်ဘာလ(၂၅)ရက်၊ စနေနေ့ (နေ့လည် ၁၂း၃၀ မှ ၃း၀၀)
နေရာ၊ Dag Hammarskjold Plaza, 47th Street and 1st Ave., New York, NY (ကုလသမဂ္ဂ ရုံးရှေ့ )
ဆက်သွယ်ရန်၊ မောင်မောင်(၂၆၀) ၄၁၈ ၉၀၃၉ ။ မိုးချမ်း (၆၄၆) ၆၄၃ ၈၆၈၉
ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး အမှတ်တရ ရေစက်ချကြွပါ။
၂၀၀၇ စက်တင်ဘာ ၊ တွင်ကျဆုံးခဲ့ကြသော ရဟန်းရှင်လူများကို ကျွတ်လွတ်ပါစေခြင်းအကျိုးငှာ ဆွမ်း၊ဆေး၊ကျောင်း၊သင်္ကန်း ဆက်ကပ် လှုဒါန်းအမျှပေးဝေမည်ဖြစ်ပါသဖြင့် အထက်ပါလိပ်စာအတိုင်းကြွရောက်ကြပါရန်လေးစားစွာဖိတ်ကြားအပ်ပါ
Posted by အာဇာနည် at 11:19 AM0comments
Posted by အာဇာနည် at 11:15 AM0comments
ယုံချင်ယုံ မယုံချင်နေ..ယုံသူ အရူး..ဥာဏ်ဝင်း ငပြူး
အရှက်မရှိ မျက်နှာပြောင် အထစ်အထစ်နဲ့ ငပြူးက ပြဲပြနေပါတယ်
Posted by အာဇာနည် at 11:08 AM0comments
ကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းရေး နေ့ ကျင်းပပုံ သတင်းမှတ်တမ်း
၂၀၁၀ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၂၁ ရက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးနေ့ အထ်ိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားကို အလုံမြို့နယ် NLD လူငယ် ခေါင်းဆောင် ကိုလူမော်လတ် နေအိမ်တွင်ကျင်းပရာ NLD ပါတီ ဥက္ကဌကြီး ဘဘဦးတင်ဦး ကြွရောက်ချီးမြှင့်အားပေး
ယနေ့ စက်တင်ဘာလ ၂၁ ရက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားကို အမှတ်(၁၄) နွယ်နီလမ်း စောရန်ပိုင် တောင် ရပ်ကွက်ရှိ အလုံမြို့နယ် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် လူငယ်ခေါင်းဆောင် ကိုလူမော်လတ်နေအိမ်တွင်ဒီမိုက ရေစီအင်အား စုများစွာဖြင့်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။
နံနက် (၁၀) နာရီအချိန်တွင် ပင့်ဖိတ်ထားသော ဆရာတော်သံဃာတော်အရှင်သူမြတ်(၅) ပါးမှ (၅)ပါးသီလပေးပြီး၊ မေတ္တာသုတ် နှင့်ဗော ဇ္ဈင်သုတ်ပရိတ်တရားတော်များကိုရွတ်ဖတ်သရဇ္ဈာယ်ချီးမြှင့်တော်မူခဲ့ကြပါသည်။၊ထို့နောက် ဆရာတော်အရှင်သူမြတ်များ ကို ကိုလူမော် လတ်၊မ၀င်းမော်ဦး(၈၈ကျဆုံး)၏အဖွားဒေါ်နီနှင့်NLD ပါတီဝင်များကလှုဖွယ်ဝတ္ထုနှင့်သင်္ကန်းများကို ဆက်ကပ် လှုဒါန်းခဲ့ပါသည်။ ဒီမိုက ရေစီတိုက်ပွဲအတွင်းကျဆုံးသွားကြကုန်သော ရဟန်းရှင်လူ၊ကျောင်းသား/သူအပေါင်းကိုအမျှပေးဝေပြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံတ၀ှမ်းရှိ အကျဉ်း ထောင်များ၌မတရားဖမ်းဆီးအကျဉ်းချထားခြင်းခံနေရသော ရဟန်းသံဃာတော်များ၊နိုင်ငံရေးသမားများနှင့် ကျောင်းသား လူငယ်မျိုး ဆက်သစ်များကိုအမြန်လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာရပါစေခြင်းငှာဆုတောင်းမေတ္တာပို့သခဲ့ကြပါသည်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ သံဃာတော်အ ရှင်သူ မြတ်များကို နေ့ဆွမ်းဆက်ကပ်လှုဒါန်းခဲ့ကြပါသည်။ကြွရောက်လာကြသောဒီမိုကရေစီအင်အားစုဧည့်ပရိတ်သတ်ကို
ကြက်သား၊၀က်သား၊ငါးဟင်း၊အသီးအရွက်အစိမ်းကြော်များ၊ ငါးပိကြော်၊တို့စရာမျိုးစုံတို့ဖြင့်တည်ခင်း ဧည့်ခံကျွေးမွေးခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါကမ္ဘာ့ ငြိမ်းချမ်းရေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ဆွမ်းကျွေးကပ်လှုပွဲအခမ်းအနားသိုို့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌကြီး ဘဘ ဦးတင်ဦး၊ဒေါက်တာမျိုးအောင် (NLD ရန်ကုန်တိုင်းစည်းရုံးရေးမှုး)၊ ရဲရဲတောက်ဦးသိန်းအောင်(ရွှေပြည်သာ)၊ဦးအေး၊ ကဗျာဆရာ ဦးသူရဇ္ဈာန်၊ ကဗျာဆရာ ဦးဘုန်းကျော် နှင့် NLD ပါတီ(အင်္ဂါဝတ်ပြုဆုတောင်းအဖွဲ့ဝင်)များ၊ မ၀င်းမော်ဦး(၈၈ ကျဆုံး)၏ အဖွား ဒေါ်နီနှင့်သူမ၏ မိသားစုဝင်များ၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ် NLD ပါတီဝင်များ၊ ရှေ့နေကြီး ဘဘဦးအုန်းမောင်၊ မမာမာဦး NLD ပါတီဝင်(ဗန်းမော်အကျဉ်းထောင်၌ထောင်ကျနေသူ)၏ဖခင်ဦးသိန်းမောင်၊ဒေါ်ရှုNLD၊ ကျောက်တန်းမြို့နယ် NLD ပါတီဥက္ကဌနှင့်ပါတီဝင်များ၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ် NLD ပါတီဥက္ကဌ ဦးသက်ဝေ နှင့်ပါတီဝင်များ၊ရှေ့နေလေးကိုဖိုးဖြူ(အလုပ်သမားအကျိုးဆောင်)၊ ကြည့်မြင် တိုင်မြို့ နယ် NLD ပါတီဝင်များ၊ကုန်ဈေးနှုန်းကျဆင်းရေးလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ဝင်များ၊ရန်ကုန်တိုင်း NLD အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ နှင့် အခြားသောဒီမိုကရေ စီ အင်အားစုများက တက်ရောက်ချီးမြှင့်အားပေးခဲ့ကြပါသည်။ထို့နောက် အလုံမြို့နယ် NLD လူငယ်ခေါင်းဆောင် ကိုလူမော်လတ်မှ တစ်ကမ္ဘာလုံး၊ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးငြိမ်းချမ်းပါစေခြင်းအတွက် ဂျိုးငှက်လေးများကို အဆုံးအဆမဲ့ကောင်းကင်ထက် သို့လွှတ်ပေး ခဲ့ပါသည်။ယင်းအပြည်အပြည်ဆိုင်ရာ ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ပွဲတွင် ရဲရဲတောက်ဦးသိန်းအောင်(ရွှေပြည်သာ)က(ငြိမ်းချမ်း တေးနဲ့ ရွှေဂျိုးဖြူကူပါမှလေး)အမည်ရှိကဗျာကိုလည်း ကောင်း၊ ကဗျာဆရာဦးသူရဇ္ဈာန်က (ငြိမ်းချမ်းရေးတမန်တော်)အမည်ရကဗျာ ကိုလည်းကောင်း၊ကဗျာဆရာဘုန်းကျော်မှ(ပြည်သူတွေကိုညှာတာပါ)အမည်ရကဗျာ(၃)ပုဒ် ရွတ်ဖတ်ပြီးဂုဏ်ပြုခဲ့ပါသည်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ကျင်းပရခြင်းအကြောင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး၎င်းပွဲကိုဦးစီးကျင်းပ ပြုလုပ်သူ ကိုလူမော်လတ် ကို အနည်းငယ်မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။
BP။ ။ ကိုလူမော်လတ်ခင်ဗျား၊စက်တင်ဘာလ ၂၁ ရက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းနေ့အထိမ်း အမှတ်ပွဲကို ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာလေးသိပါရစေ။
ကိုလူမော်။ ။ ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော်ဒီ ငြိမ်းချမ်းရေးပွဲလေးကို အကြောင်းမဲ့၊ရည်ရွယ်ချက်မရှိပဲလုပ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ကမ္ဘာလုံး မှာရှိတဲ့လူတွေ၊ မြန်မာပြည်အတွင်းမှာရှိနေကြတဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေ၊နောက်ပြီးတော့ ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲအတွင်းမှာ ကျဆုံးသွားခဲ့ကြတဲ့ညီအစ်ကို မောင်နှမတွေ၊နောက် ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့အမေလို့ သတ်မှတ်ပြီး၊ဒီမိုကရေစီလမ်းပြကြယ်လို့ နှလုံးသားထဲမှာစွဲမြဲနေတဲ့အန်တီ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်တကွ၊ မြန်မာနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ အကျဉ်းထောင်တွေမှာ ဒီမိုကရေစီအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ရင်း အကျဉ်းချခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကို အမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ငြိမ်းချမ်းစေချင်တဲ့ဆန္ဒနဲ့ သံဃာတော်တွေကိုပင့်ဖိတ်ဆွမ်းကပ်လှုပြီး မေတ္တာပို့သ၊အမျှပေးဝေချင်လို့ပါ။ကျွန်တော့်အဖေလည်းခု ဗန်းမော်ထောင်မှာ အနှစ်(၂၀) အကျဉ်းချခံထားရပါတယ်။ကျွန်တော့်အဖေ က အလုံမြို့နယ် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဥက္ကဌ ဦးဘမြင့်ပါ။ ခုဒီပွဲကို ကျွန်တော် မဖြစ်ဖြစ် အောင်လုပ်မယ် လို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။အဲ့အတွက် ကျွန်တော့်အဖေဆီတောင်၊ထောင်ဝင်စာသွားမတွေ့ရသေးပါဘူး။ ကျွန်တော် ပြောချင်တာ က ခုလက်ရှိအုပ်ချုပ်နေတဲ့ နိုင်ငံတော်လူကြီးများကို အန်တီဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်တကွ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကို အမြန်ဆုံး လွှတ်ပေးပါလို့တောင်းဆိုပါတယ်။သူတို့တွေက အကြမ်း ဖက်သမား တွေလည်းမဟုတ်၊ နိုင်ငံတော်ကို လုပ်ကြံကြတဲ့သူတွေ လည်းမ ဟုတ်ဘူး၊သူပန်သူကန်တွေလည်းမဟုတ်ပါဘူး။
တို့မိသားစု လည်း တကွဲတပြားဖြစ်နေတော့ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ခံစားနေရတာကိုစာနာပြီး သူတို့တွေအတွက်၊အားလုံးအတွက်ရည်ရွယ်
(ကိုလူမော်လတ်ဟာသူရေစက်ချနေစဉ် ဘဘဦးတင်ဦးရောက်လာချိန်မှာ မျက်ရည်တွေ၊တွေတွေကျခဲ့သလို၊ ကျွန်တော် အင်တာဗျူး နေစဉ် မှာလည်း မျက်ရည် များကျခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသား အားလုံးအမြန်ငြိမ်းချမ်းမှုရပါစေ လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာကပဲ ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သ လိုက်ပါတယ်။)
Posted by အာဇာနည် at 10:53 AM0comments
လူတယောက်၏ဂုဏ်ရည်သည် အနုမြူဗုံးမဟုတ်၊အာဏာ မဟုတ် ၊စစ်မှန်သောလူ့ နှလုံးသားပိုင်ရှင်သာလျင်ဖြစ်၏
ဒေါ်စုအတွက် အာရှလစ်ဘရယ် ဒီမိုကရေစီဆု -By မခင်ဖြူထွေး တနင်္လာ, 20 စက်တင်ဘာ 2010
အာရှနိုင်ငံတွေက လစ်ဘရယ်နဲ့ ဒီမိုကရက်များ ကောင်စီက မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို သူတို့ရဲ့ ဂုဏ်ထူးဆောင် အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်တဲ့ အခမ်းအနားတရပ်ကို မနေ့က ဗြိတိန်နိုင်ငံ လီဗာပူးမြို့မှာ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ စက်တင်ဘာလ ၁၉ ရက်နေ့ကစပြီး လီဗာပူးမြို့မှာ ကျင်းပနေတဲ့ ဗြိတိန် လစ်ဘရယ် ဒီမိုကရက်ပါတီရဲ့ ညီလာခံ နောက်ဆုံးနေ့မှာ သီးခြား အခမ်းအနားတရပ် ကျင်းပပြီး အခုလို ဂုဏ်ပြုပွဲကို လုပ်ခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို မခင်ဖြူထွေးက တင်ပြပေးထားပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ကိုယ်စား ဆုလက်ခံယူခဲ့တဲ့ ဗြိတိန်အခြေစိုက် မြန်မာ့အရေး လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ Burma Campaign UK အဖွဲ့က နိုင်ငံတကာ လုပ်ငန်းတာဝန်ခံ မဇိုယာဖန်းက ဒီဆုဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အတွက်ရော မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ အတွက်ပါ အကျိုးရှိတဲ့ ဆုတဆုလို့ ပြောပါတယ်။
“ဒီဆုက Council of Asian Liberals and Democrats အဖွဲ့ကြီးက ဂုဏ်ထူးဆောင် အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဒီဆု ပေးလိုက်ပါတယ်။ အဲဒါ တကယ့်ကို အရေးကြီးပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဒီလိုမျိုးဆုဟာ ပထမဆုံးဆု ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဒါလည်း ဒေါ်စုက ရသွားတယ်ဆိုတော့ မြန်မာပြည်အတွက် အင်မတန် ကောင်းပါတယ်။
“နိုင်ငံတကာမှာလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အကြောင်းကို လူတွေက ပိုသိလာမယ်၊ ပြီးတော့ အခု ဒီဆုကို ကြော်ငြာလုပ်တာကလည်း ဗြိတိန်နိုင်ငံ လီဗာပူးမြို့မှာ အခုလက်ရှိ လုပ်နေတဲ့ UK ရဲ့ လစ်ဘရယ် ဒီမိုကရက် အစည်းအဝေးကြီးမှာဆိုတော့ တက်ရောက်လာတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေလည်း မြန်မာပြည် အကြောင်းကို ပိုသိလာမယ်၊ ပြီးတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အကြောင်းကိုလည်း သူတို့ ပိုပြီးတော့ စိတ်ဝင်စားလာမယ်ပေါ့။ အဲဒါကြောင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အတွက်လည်း ကောင်းတယ်၊ မြန်မာပြည် တခုလုံး အတွက်လည်း ကောင်းပါတယ်။”
ဆုပေးပွဲ မတိုင်ခင်မှာလည်း အာရှဒေသတွေက တက်ရောက်လာကြတဲ့ လစ်ဘရယ်နဲ့ ဒီမိုကရက် ကိုယ်စားလှယ်တွေ အကြား မြန်မာ့အရေး ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာတွေ ရှိတယ်လို့လည်း မဇိုယာဖန်းက ပြောပြပါတယ်။
“ဒီဆုပေးပွဲ မတိုင်မီမှာတော့ ကိုယ်စားလှယ်တွေ ကြားထဲမှာ မြန်မာပြည်အကြောင်း ဆွေးနွေးတာ ရှိပါတယ်။ ဥပမာ အခုလက်ရှိ နိုင်ငံရေး အခြေအနေ၊ လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေ၊ ပြီးတော့ စစ်အာဏာရှင်တွေ လုပ်မယ့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲက မြန်မာပြည်အတွက် ဒီမိုကရေစီအရေးနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးအတွက် ပြောင်းလဲမှုတွေ မရှိနိုင်ဘူး၊ အဲဒီလိုမျိုး ဆွေးနွေးတာမျိုး ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် ချတာတော့ မရှိပါဘူး။
“ပြီးတော့ ဆုပေးပွဲ အခမ်းအနားထဲမှာ ဆိုရင် ဆုပေးတဲ့ CALD ရဲ့ ကိုယ်စားလှယ် လူကြီးကတော့ မြန်မာပြည်ကို ဒီ့ထက်ပိုပြီးတော့ ထောက်ပံ့ပေးနိုင်အောင်၊ ကူညီပေးနိုင်အောင် သူ့ဘက်ကနေ တတ်နိုင်သလောက် လုပ်ပေးမယ်၊ ပြီးတော့ တဆက်တည်းမှာပဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ သူ့ရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေကို သူ အမြဲတမ်းပဲ Support လုပ်နေတယ်ပေါ့။ သူ့ရဲ့ပါတီလည်း မြန်မာပြည် အရေးအတွက်၊ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ ဒီမိုကရေစီ အရေးအတွက် သူတို့ဘက်က တတ်နိုင်သလောက် ဆက်လက်ပြီးတော့ ကူညီမယ်လို့ ပြောပါတယ်။”
ဗြိတိန်အခြေစိုက် မြန်မာ့အရေး လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ Burma Campaign UK ရဲ့ နိုင်ငံတကာ လုပ်ငန်းတာဝန်ခံ မဇိုယာဖန်း ပြောပြသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခမ်းအနား တက်ရောက်လာကြတဲ့ ဒီမိုကရက်နဲ့ လစ်ဘရယ် ပါတီတွေက ကိုယ်စားလှယ်တွေ အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီရေးနဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ကိစ္စတွေအတွက် အခုထက်ပိုပြီး ပံ့ပိုးကူညီမှုတွေ လုပ်သွားဖို့ ကြိုးစားသွားမယ့် အကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ကြတယ်လို့လည်း မဇိုယာဖန်းက ပြောပြပါတယ်။
စက်တင်ဘာလ ၁၉ ရက်နေ့ကနေ ၂၀ ရက်နေ့အထိ လီဗာပူးမြို့မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ ဗြိတိန် လစ်ဘရယ် ဒီမိုကရက်ပါတီ ညီလာခံ အတွင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံကိစ္စကို ထည့်သွင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါ။ မြန်မာစစ်အစိုးရ ကျင်းပဖို့ စီစဉ်နေတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဟာ တရားမျှတမှု မရှိသလို ဒီရွေးကောက်ပွဲကနေ နိုင်ငံရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ အတွက် လမ်းစ မမြင်ဘူးလို့ ဗြိတိသျှ အာဏာရပါတီ ညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့ထဲက လစ်ဘရယ် ဒီမိုကရက် ပါတီရဲ့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဂျရယ်မီ ရစ်ချာ့ဒ် ဘရောင်း (Jeremy Richard Browne) ကလည်း ပြောပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် စစ်အစိုးရ ပြုလုပ်မယ့် ရွေးကောက်ပွဲကို လက်မခံသလို အတိုက်အခံတွေ ကြိုးစားနေကြတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ဆန့်ကျင်ရေး ကိစ္စတွေမှာ ဘယ်လို ကူညီပေးရမလဲ ဆိုတာကိုလည်း လစ်ဘရယ် ဒီမိုကရက် ပါတီရဲ့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက ကမ်းလှမ်းလိုက်တယ်လို့ ဒီညီလာခံကို တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်-လွတ်မြောက်နယ်မြေရဲ့ နိုင်ငံခြားရေး တာဝန်ခံ ဦးညိုအုန်းမြင့်က ပြောပြခဲ့ပါတယ်။Rest of your post
ဗမာတွေ... အနှစ် ၆၀ ကျော်ဆိုတဲ့သင်္ခန်းစာ ယူတတ်မယ်ဆိုရင်
စာကြွင်း။ ကျောက်တုံး အရည်ခွံချွတ်ရင်တောင် သွေးစသွေးန တွေ့ ဦးမယ်... ဒီလိုဖွတ်တွေ ပြောသလိုယုံပြီး ကိုယ့် လည်ပင်ကိုယ်တော့ တရစ်ရစ်မလှီးကြစေလို ။ အော်ရင်လေး ပါဘိ ပြည်မြန်မာ။
ကြံ့ဖွံ့ပါတီ ကိုယ်စားလှယ်များကို မဲဆွယ်ရေး သင်တန်းပေးမည်
စည်သူ Tuesday, September 21, 2010
ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီ (ကြံ့ဖွံ့ပါတီ) က ၎င်းတို့၏ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကို ရွေးကောက်ပွဲအကြို မဲဆွယ်ရေး သင်တန်းပေးရန် စီစဉ်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
လွှတ်တော်အသီးသီးအတွက် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် ကြံ့ဖွံ့ပါတီ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကို နေပြည်တော်၊ ဒက္ခိဏသီရိ မြို့သစ်ရှိ ကြံ့ဖွံ့ပါတီ ရုံးချုပ်၌ မဲဆွယ်ရေး ရက်တိုသင်တန်း ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ကြံ့ဖွံ့ပါတီနှင့် နီးစပ်သူတဦးက ပြောသည်။
“သင်တန်းကို အခုရက်ပိုင်းအတွင်း စမယ်ကြားတယ်။ လူကြီးတွေကတော့ မကြာခဏဆိုသလို လိုအပ်ရင် သင်တန်းပေးမယ် ပြောတယ်။ ဘယ်နေ့မှာ စမယ်တော့ မပြောတတ်ဘူး” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
ကြံ့ဖွံ့ပါတီ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကို အသုတ်လိုက်ခွဲ၍ သင်တန်းပေးမည် ဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရသည်။
စစ်အစိုးရသည် မဲအပြတ်အသတ်ဖြင့် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (NLD) ကို ရှုံးနိမ့်ခဲ့သော ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲကို သင်ခန်းစာယူကာ ငွေအား၊ လူအား၊ မီဒီယာအင်အားအပြင် အာဏာကိုပါ အသုံးချ၍ ရွေးကောက်ပွဲ အနိုင်ရရှိရေးအတွက်
ဆောင်ရွက်နေကြောင်း ပြည်တွင်းမှ နိုင်ငံရေးလေ့လာသူတဦးက ဆိုသည်။
နိုင်ငံရေး စိတ်ဝင်စားသူ လူငယ်တဦးက “ကျနော်တို့ကတော့ ဒီမိုကရေစီ ပါတီတခုခုကိုပဲ မဲပေးမယ်။ ကြံ့ဖွံ့နဲ့ တစည (တိုင်းရင်းသား စည်းလုံး ညီညွတ်ရေးပါတီ) ကတော့ NO ပဲ။ ကျနော်တို့နယ်မှာ အဲဒီပါတီ ၂ ခုတည်း ရှိနေရင် ဘယ်ပါတီမှ
ပဲခူးတွင်လည်း ကြံ့ဖွံ့ပါတီ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကို ၅ ရက်ကြာ ရွေးကောက်ပွဲ အကြို မဲဆွယ်မှု သင်တန်း ပေးကြောင်း သိရသည်။
ကြံ့ဖွံ့ပါတီသည် နိုင်ငံသား စိစစ်ရေးကတ်များထုတ်ပေးခြင်း၊ လမ်းခင်းပေးခြင်း၊ စာသင်ကျောင်းများသို့ ငွေလှူဒါန်းခြင်း၊ အတိုးနှုန်းနည်းနည်းဖြင့် ငွေထုတ်ချေးခြင်း၊ လျှပ်စစ်မီးသွယ်ပေးခြင်းနှင့် မျက်မှန်များ အခမဲ့ဝေခြင်း အပါအဝင် နောက်ဆုံးရရှိသည့် သတင်းများအရ ၁၅ သိန်းတန် CDMA ဖုန်းများကိုပါ အခမဲ့ပေး၍ နည်းလမ်းမျိုးစုံဖြင့် မဲဆွယ်လျက်ရှိကြောင်း သတင်းဖော်ပြချက်များအရ သိရသည်။Rest of your post
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 3:09 PM0comments
တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များ ဒုတိယအကြိမ် လှ...
နွားလှည်းတော့ ယောင်လို့ တောင် မတက်လိုက်နဲ့ တခါတည်း...
မြန်မာ့နိုင်ငံအရေး သတင်း အမှန်တင်နေသော အင်တာနက်စာမ...
"အကုန်ထအုံကြွ" မယ်ဆိုတဲ့ တောင်ကိုရီးယားက မျိုးချစ်...
ဗမာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများ တပ်ေ...
မှန်တာလေးတွေ အပြောခံရတော့ ရှက်ရမ်းလေးရမ်းတာပါ ။Mas...
ဥာဏ်ဝင်းကတော့ ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်တွေ ရှေ့ မှာ ပေါ်တင်ြ...
မြောင်းမြနှင့် ၀ါးခယ်မတွင် ကြံ့ဖွံ့ပါတီ ပွဲကြမ်းနေ...
သံဃာတော်များသွေးမြေကျခဲ့ရသည့် နှစ်ပတ်လည်နေ့တွင် ဂျ...
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး တရုတ်နိုင်ငံသို့ သွားရောက်ပြီး ...
ဂျပန်တွင် နတ်ကန္ဒားပွဲကြီး ချိမ့်ချိမ့်သဲ ကျင်းပတော...
အီရန် အာဏာရှင်သမ္မတ မိန့် ခွန်းကို ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံတွေ...
ပျော်လို့ ထိုင်နေတာမဟုတ်၊ လူသားချင်း မငှဲ့ ညာခံရတဲ...
ဖြုတ် မျက်လုံးနဲ့ ရေတစက် ပင်လယ်ထင်နေ တော့ မခက်လား ...
သဘောထားကြီးကြီးနဲ့ သံဃာတွေတော့ သတ်မိပါတယ်၊ သေဒဏ်ကျ...
ရွေးကောက်ပွဲပြီးရင် ပြည်တွင်းစစ်ကြီးလာတော့မယ် (ရန်...
စစ်ရာဇ၀တ်ကောင်တွေ ထုတ်ဖေါ်စုံစမ်းရေးအတွက် ပြင်သစ်ထေ...
လူ့ အခွင့်အရေးချိုးဖေါက်မှု(လူမဆန်တဲ့ ရက်စက်မှု အတွ...
လူတယောက်၏ဂုဏ်ရည်သည် အနုမြူဗုံးမဟုတ်၊အာဏာ မဟုတ် ၊စစ...
ဗမာတွေ... အနှစ် ၆၀ ကျော်ဆိုတဲ့သင်္ခန်းစာ ယူတတ်မယ်ဆ...
မကြာမှီ မှာ မမျှော်ဘဲ လာတော့မည့်
ကြောက်ချေး ပါလှချည်လား ရွှေရည်စိမ် ဘဘ..ဟာ ဟာ့
ချီးမြှင့်ထိုက်သူအတွက် ဆု နောက်ထပ် တစ်ပြား..ဆုမရထိ...
နအဖနှင့် ကေအဲန်ယူတိုက်ပွဲဖြစ် နအဖ ၁၁ဦး ထိခိုက်သေဆ...
စင်္ကာပူရောက် ကိုသန်းစော ရထားကြိတ်ခံရပြီး သေဆုံး
အင်းလေးကန်ပြင်ဖို့ ဒေါ်လာ၁၅ သန်း နှင့် ပြင်ဆင်မွမ်း...
ပုပ်ရဟန်းမင်း ၀တ်ပြုပွဲမှာ မြန်မာ့လူ့အခွင့်အရေးကိစ...
ကလေးတွေစာမတတ်တော့ ..အော် ဗမာပြည်ရယ်ဒုက္ခ
စစ်အာဏာရှင် အဘိဓါန်မှာ စာနာတယ်ဆိုတာမရှိ
န.အ.ဖ စစ်အုပ်စုရဲ့ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးတ...
၈၈၈၈ ပြည့်သူ့ သတင်းစဉ် ။ Vol6No 5
ကလိမ်စေ့ ငြမ်းဆင် နိုင်ငံရေးသမားများအားသတ်ိထား
NCGUB ဝန်ကြီးချုပ် ဦးစိန်ဝင်း ရဲ့ နိုင်ငံရေးသုံးသ...
အမေရိကန်နှင့် ပြည်ပတွင် အရှုံးနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသော ...
န.အ.ဖ စစ်အုပ်စု၏ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေး
ပါတီရောင်းတယ်...ပါတီဝယ်တယ်... အရုပ်နဲ့လဲတယ်.. မုန်...
ပြည်ပရောက် အပျော်အပါးမက်တဲ့ မြန်မာတွေ ကိုယ်ခြင်းစာ...
ရွာထဲ ကျောက်စိမ်းတူးမည့် အစီအစဉ်ကြောင့် ဖားကန့်ဒေသ...
၀ါရင့်နိုင်ငံရေးသမားကြီး သခင်အုန်းမြင့် ကွယ်လွန်
သခင် အုန်းမြင့် ၏ ဈာပန အား ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လို...
သမိုင်းကို ညာတာ မမေ့ကြနဲ့အလိုတော်ရိလောက်ကောင်တွေ...
ဒါဘဲထင်တယ် သက်ကြားအို ငသန်းရွှေ
NLD ၏တရားဝင် မ၀င် တုန့် ပြန်ချက်
သန်းရွှေ ဂုဏော..အယုတ် တရော..
အလံတော်လွှင့်ထူပွဲ. နွှဲကြရအောင် ကြွကြပါ
အာဏာရှင် လက်အောက် ဗိုက်မှောက်နေရသည့် ဘဝများ...
့ စပွန်ဆာ ကြောင့် အကြောတင်း တဲ့ ရွှေမင်းသမီး..
တရားဝင်ပါတီ အပေါ်နှင့်..တရားမ၀င်အစိုးရ၏ ဖိနှိပ်ချက်...
ကျွတ်ကျွတ်ရွရွ ပလပ်စတစ်ကြော် ပူပူနွေးနွေးလေး ရမယ်
အရုဏ်ဦးမှာ ဖူးသည့်ကြာ မှ လောက်ကောင် စာရင်းများ.....
ဂျပန်ရောက် မြန်မာများက စစ်အစိုးရ၀ါဒဖြန့်သရုပ်ဆောင်...
အတုအယောင် ရွေးကောက်ပွဲကို လက်မှတ်ရေးထိုး ဆန့်ကျင်န...
ကြံ့ဖွတ် အနုပညာသမား အလိုမရှိ
မလွန်ဆန်နိုင် သင်္ခါရ ဆိုပေမယ့် မလွန်ဆန်နိုင် အာဏာရ ...
ထားခဲ့ရင်..ကြားကားဆွဲသွားမှာ ကြောက်လို့ 